မြန်မာပြည်နှင့် ဦးနှောက်လှည့်စီးခြင်း (Brain Circulation)
သြဂုတ်လ ၆ ရက်နေ့တွင် ဖြန့်ချိလိုက်သော စင်ကာပူနိုင်ငံ ဝန်ကြီးချုပ်ဟောင်း လီကွမ်ယု၏ One Man’s View of the World စာအုပ်သစ်တွင် ပြည်ပရောက် မြန်မာပညာရှင် အင်အားစု ပြည်တော်ပြန် လုပ်ကိုင်ကြလျှင် မြန်မာနိုင်ငံ၏ စီးပွားရေး တိုးတက်မှု ပိုမိုမြန်ဆန်မည်ဟု ကောက်ချက်ချ ရေးသားထားသည်။ မြန်မာပြည်မှ ယိုစီးသွားခဲ့သော ဦးနှောက်များ ပြည်တွင်း ပြန်စီးဝင်နိုင်လျှင် မြန်မာပြည်မှ အကျိုးအမြတ် ရမည်ဟု ရိုးရှင်းစွာချသည့် ကောက်ချက်လား၊ စင်ကာပူနိုင်ငံမှ အဆင့်မြင့် ပညာသင်ကြား လေ့ကျင့်ပေးထားသော မြန်မာဦးနှောက်များ ဌာနေပြန်သွားလျှင် စင်ကာပူတွင် အရှုံးပေါ်နိုင်လိမ့်မည်ဟု သတိပေးသည်လား ဆိုသည်တော့ မကွဲပြားလှ။
ဦးနှောက် ယိုစီးခြင်းဟူသော ဝေါဟာရသည် ၁၉၆၀ ဝန်းကျင်တွင် ဗြိတိန်ပညာရှင် အများအပြား အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုသို့ ထွက်ခွာကြ သည်မှ အစပြု၍ ဗြိတိန် သတင်းစာများမှ သုံးစွဲလာခြင်း ဖြစ်သည်။ မြန်မာနိုင်ငံတွင်လည်း ၁၉၉၀ နောက်ပိုင်း တွင် မြန်မာပညာရှင်များ နိုင်ငံပေါင်းစုံသို့ အစုလိုက် အပြုံလိုက် ထွက်ခွာမှုများ ရှိခဲ့သည်။ ဖွံ့ဖြိုးပြီး နိုင်ငံတစ်ခုဖြစ်သည့် ဗြိတိန်နိုင်ငံမှ အစပြုသုံးနှုန်းခဲ့သည့် ဝေါဟာရ ဖြစ်သော်လည်း ဖွံ့ဖြိုးဆဲ နိုင်ငံများမှ ပညာရှင်များ ပြည်ပထွက်ခွာ အခြေချခြင်းကို ရည်ညွှန်းသည်က နှောင်းပိုင်းနှစ်များတွင် ပိုမိုတွင်ကျယ်လာသည်။
အမှန်တကယ်မှာမူ ဦးနှောက် ယိုစီးခြင်း၏ဒဏ်ကို ခံစားရသည်မှာ ဖွံ့ဖြိုးဆဲ နိုင်ငံများတွင်သာ မဟုတ်ချေ။ ဖွံ့ဖြိုးပြီး နိုင်ငံများသည်လည်း အပါအဝင် ဖြစ်သည်။ ပညာရှင်များအဖြစ် ပေါ်ထွန်းလာစေရန် ဥယျာဉ်မှူးကဲ့သို့ ပြုစုပျိုးထောင်ထားသည့် ဌာနေနိုင်ငံများမှာ အသီးအပွင့်များ မခံစားရ၍ နစ်နာသည်ဟု ယူဆကြ၍ ဦးနှောက် ယိုစီးသည်ဟု ဆိုလိုကြခြင်း ဖြစ်သည်။
ဦးနှောက်ယိုစီးခြင်း ဖြစ်ရသည့် အကြောင်းရင်းမှာ ဦးနှောက် ပြုန်းတီးမှု (Brain Waste) ကြောင့် ဖြစ်သည်ဟု နိုင်ငံတကာ စာတမ်းများက ထောက်ပြကြသည်။ ပညာရှင် အများအပြားသည် တတ်မြောက်ထားသော ပညာရပ် အဆင့်အတန်းအထိ အသုံးချခွင့် မရပါက ပြုန်းတီးမခံနိုင်ဘဲ အသုံးချခွင့် ရနိုင်သော ဒေသများသို့ ပြောင်းရွှေ့ အသုံးချလိုကြသည်။
ယခင် ဆယ်စုနှစ်များတွင် ကျင့်သုံးခဲ့သော တပ်မတော် အရာရှိများ အစိုးရဌာန ပေါင်းစုံသို့ ဝင်ရောက် စီမံအုပ်ချုပ်စေခြင်းသည် အရပ်ဘက် ဌာနများမှ ပညာရှင်များ၏ ဦးနှောက် အများအပြားအား ပြုန်းတီးစေခဲ့သည်။ ထို့အတူ စစ်ပညာအထူးပြု သင်ယူထားကြသော တပ်မတော် အရာရှိများသည်လည်း သင်ယူထားသော စစ်ဘက်ဆိုင်ရာ ပညာရပ်၊ လုပ်ကိုင်ခဲ့သော စစ်ရေး အတွေ့အကြုံ များနှင့် မကိုက်ညီသည့် ဌာနများ ပြောင်းရွှေ့ လုပ်ကိုင်ရခြင်းသည် တပ်မတော် အရာရှိတို့၏ ဦးနှောက် ပြုန်းတီးခြင်းပင် ဖြစ်သည်။ အချို့ ဦးနှောက်များမှာ ပြုန်းတီးသော် လည်း အခြားနိုင်ငံများသို့ ယိုစီးမသွား။ အချို့ ဦးနှောက်များမှာ ပြုန်းတီး မခံနိုင်၍ အခြားနိုင်ငံများသို့ ယိုစီးသွားခဲ့ကြသည်။
လူမှု သိပ္ပံပညာရှင်များအကြား ၁၉၆၀ နှစ်များတွင် စတင်သုံးနှုန်းခဲ့သော ဦးနှောက် ယိုစီးခြင်းဟူသည့် အယူအဆမှာ နှစ်ပေါင်း ၂၀ ကျော်အကြာ ၁၉၈၀ နောက်ပိုင်းတွင် ပြောင်းလဲသွားသည်။ ဌာနေနိုင်ငံမှ ဆုံးရှုံးရသည်ဟု ယူဆရသည့် ပညာရှင်များသည် ပြောင်းရွှေ့ သွားသည့် နိုင်ငံများတွင် သေတစ်ပန် သက်တစ်ဆုံး မနေနိုင်ကြဘဲ မိဘဆွေမျိုးနှင့် မိတ်ဆွေ အသိုင်းအဝိုင်းများရှိရာ ဇာတိချက်မြှုပ်သို့ ပြန်ဝင် အခြေချလာရာ ပိုမို ဖွံ့ဖြိုးပြီးနိုင်ငံတွင် ရရှိခဲ့သည့် ပညာ၊ အတွေ့အကြုံများကြောင့် ဦးနှောက်များမှာ ပိုမိုအဖိုးတန်လာပြီး မိခင်နိုင်ငံမှာ အမြတ်ရသည်ဟု ယူဆကြပြန်သည်။ ဦးနှောက် ပြန်စီးဝင်ခြင်း (Brain Gain) ဟု ခေါ်ဆိုကြသည်။
ထိုမှတစ်ဖန် ရွေ့လျား ပြောင်းလဲလာသော ကမ္ဘာပြုမှု ဖြစ်စဉ်ကြောင့် ၂၀၀၀ ပြည့်နှစ် အလွန်ခေတ်များနှင့် ပိုမိုကိုက်ညီသည့် အယူအဆတစ်ရပ် လူမှုသိပ္ပံပညာရှင်များကြား ရေပန်းစားလာပြန်သည်။ ဦးနှောက် လှည့်စီးခြင်း (Brain Circulation) ဟု အမည်ပေးလိုက်ကြသည်။
ယနေ့ခေတ် ကျွမ်းကျင် ပညာရှင်များသည် ယခင်နှစ် ၅၀ ကျော်က ကဲ့သို့ နိုင်ငံတစ်နိုင်ငံထဲမှ ပြုစုပျိုးထောင်ထားသည့် ပညာရှင်များ မဟုတ်ကြတော့။ နိုင်ငံစုံ လှည့်ပတ်သွားလာကာ ပညာရှာမှီးပြီး လုပ်ငန်း အတွေ့အကြုံ ရှာယူ လုပ်ကိုင်နေကြသည့် လူငယ်များ ဖြစ်လာသည်။ ထိုသူတို့ကို ပညာရှင်များ ဖြစ်လာစေရန် အစိုးရ တစ်ရပ်ထဲမှ တာဝန်ယူ ထောက်ပံ့ခြင်းမျိုး မဟုတ်။ သူတို့လုပ်အား၊ စုဆောင်းငွေ၊ ဘဏ်ချေးငွေ အစရှိသည့် ကိုယ်ပိုင် အစီအမံများဖြင့် ပညာရှာမှီးကြခြင်း ဖြစ်သည်။
ဌာနေနိုင်ငံမှ ထွက်ခွာပြီး အခြားနိုင်ငံတစ်ခုတွင် သွားရောက် လုပ်ကိုင်၍ လေ့ကျင့် သင်ကြားပေးခဲ့သော ဌာနေနိုင်ငံမှ ဆုံးရှုံးရပြီး အခန့်သင့် ရရှိသွားသည့် အခြားနိုင်ငံမှ အမြတ်ရသည်။ သို့သော် ထိုပညာရှင်သည် အဆိုပါ နိုင်ငံတွင် ကိုယ်ပိုင် အစီအစဉ်ဖြင့် ထပ်မံ ပညာသင်၊ တစ်ဆင့် မြင့်မားသော အလုပ်အကိုင်များ လုပ်ကိုင်ပြီးသောအခါ ထိုပညာရပ် အတွေ့အကြုံတို့ဖြင့် ပိုမိုကောင်းမွန်သော အခွင့်အလမ်းများ ဖမ်းဆုပ်နိုင်ရန် မိခင်ဌာနေသို့ ပြန်ဝင်သွားပြန်သည်။
ထိုအခါ အဆိုပါ ပညာရှင်များ ရောက်ရှိသွားခဲ့သော နိုင်ငံများမှာလည်း ဝင်လာခဲ့စဉ်က ရရှိခဲ့သည့် အမြတ်နှင့် ပြန်ထွက်သွား၍ ဆုံးရှုံးရသည့် အရှုံးကြောင့် လုံးဝမြတ်သည် မဆိုနိုင်ချေ။ မိခင်နိုင်ငံ အတွက်သည်လည်း ထိုနည်းနှင့် လုံးဝရှုံးသည် မဆိုနိုင်ချေ။ ယခင် အယူအဆများကဲ့သို့ အမြတ်နှင့် အရှုံး (Win-Lose) အခြေအနေ နှစ်မျိုးထဲ ကောက်ချက်ချယူဆ၍ မရတော့။ ဤဖြစ်စဉ်ကိုပင် ဦးနှောက်များ လှည့်စီးခြင်း (Brain Circulation) ဟု အမည်ပေး ခေါ်ဝေါ်ကြခြင်း ဖြစ်သည်။
လွန်ခဲ့သည့် အနှစ် ၂၀ မှ အစပြုကာ မြန်မာလူငယ် အများအပြားသည်လည်း နိုင်ငံရပ်ခြား ထွက်၍ အဆင့်မြင့်ပညာ သင်ကြားသူများ နှစ်စဉ် တိုးပွားလာခဲ့သည်။ အိမ်နီးချင်း ထိုင်းနိုင်ငံ၊ စင်ကာပူ၊ မလေးရှား၊ ဖိလစ်ပိုင်မှသည် ဂျပန်၊ သြစတြေးလျ၊ ဗြိတိန်၊ အမေရိကန် အစရှိသည့် ဖွံ့ဖြိုးပြီး နိုင်ငံများတို့တွင် မိမိတို့ကိုယ်ပိုင် အစီအစဉ်ဖြင့် ပညာသင်ကြားပြီး လုပ်ငန်းခွင် ဝင်ရောက် လုပ်ကိုင်နေသူ အရေအတွက်မှာ နည်းသည်ဟု မဆိုနိုင်ချေ။ ထိုသူများ လက်ရှိ သမိုင်းဝင် အပြောင်းအလဲအတွင်း တိုင်းပြည် တည်ဆောက်ရေး လုပ်ငန်းများတွင် ပါဝင်လုပ်ကိုင်နိုင်လျှင် ဦးနှောက် လှည့်စီးခြင်းဟု ခေါ်ဆိုနိုင်မည် ဖြစ်သည်။
သို့ရာတွင် ဦးနှောက် ယိုစီးခြင်းသည် ဦးနှောက် ပြုန်းတီးမှု (ဝါ) အသုံးမချနိုင်မှုကြောင့် ဌာနေမွေးရပ်မြေကို စွန့်ခွာထွက်သွားရခြင်း၏ အကြောင်းရင်း ဖြစ်သည်ကို မေ့ထား၍ မဖြစ်နိုင်ချေ။ ထို့အပြင် ပညာရှင်များ ပြန်ထွက် မသွားစေရေးအတွက် ဖွံ့ဖြိုးပြီးနိုင်ငံများမှ ဆွဲဆောင်မည့် မက်လုံးများ ဖြစ်သည့် အမြဲတမ်း နေထိုင်ခွင့်များ၊ နိုင်ငံသား အခွင့်အရေးများ၊ သားသမီးများအတွက် ကောင်းမွန်သည့် ပညာရေးစနစ်၊ အဆင့်မြင့် ကျန်းမာရေး စောင့်ရှောက်မှု၊ လူတန်းစေ့ နေထိုင်နိုင်သည့် အိမ်ရာ စီမံကိန်းများနှင့် ဝယ်ယူနိုင်စေရန် ထုတ်ပေးထားသည့် အတိုးနိမ့် နှစ်ရှည် ချေးငွေများ အစရှိသည်တို့ကလည်း ဆုံးဖြတ်ရခက်စေရန် လွန်ဆွဲထားဦးမည် ဖြစ်သည်။
ထို့ကြောင့် ဦးနှောက်များ ပြန်စီးဝင်ခြင်း (Brain Gain) သို့မဟုတ် ဦးနှောက်လှည့်စီးခြင်း (Brain Circulation) စသည့် မည်သို့သော ဝေါဟာရ သုံးနှုန်းသည်ဖြစ်စေ နိုင်ငံစုံတွင် ရောက်ရှိနေသည့် ဦးနှောက်များ ပြည်တွင်း တွင် ပြန်လည် အခြေချ လုပ်ကိုင်လာစေရေးအတွက် လေ့လာခဲ့သည့် ပညာနှင့် လုပ်ကိုင်လာသည့် အတွေ့အကြုံများ မပြုန်းတီးစေဘဲ ထိုက်တန်စွာ အသုံးချနိုင်မည့် အခွင့်အလမ်းများ ရှိနေရန် လိုအပ်သည်။ သို့မှသာ ပြည်ပရောက် မြန်မာပညာရှင် ဦးနှောက်များသာမက အခြားနိုင်ငံမှ ဦးနှောက်များပါ လှည့်ပတ် စီးဝင်လာစေရန် ဆွဲဆောင်နိုင်မည် ဖြစ်သည်။
အသရေဖျက်ရန်ကြံရွယ်ခြင်းမဟုတ်ကြောင်း ဦးဝေယံအောင်မှ ဖြေရှင်းချက်
STARS & MODELS INT'L မှ ဦးဂျွန်လွင်က " ဦးဝေရန်အောင် (National Director , Miss Supranational Myanmar,Miss Grand Myanmar) ဖြစ်ပြီး လိပ်မူထားသည့်Email မှာ [email protected] ဖြစ်သည်။အောက်ပါရေးသားချက်များသည် Stars and Models Agency နှင့်ခင်လပြည့် ဇော်တို့ အား တိုက်ရိုက်အသရေဖျက် ရန်ကြံရွယ် ဖန်တီးထားသည့် ရေးသားချက်များသာ ဖြစ်ကြောငိး အသိပေးလိုပါသည်။"ဟုဆိုသောကြောင့်Miss Supranational Myanmar,Miss Grand Myanmar ရဲ့ Organizer ဦးဝေယံအောင် (National Director) က"မနက်က ကိုဂျွန်လွင် ကျနော့်ဆီဖုန်းဆက်လာတယ်၊ ကျနော် ပြောချင်တာက missmyanmar.org နဲ့ပို့တာ ၊ ကျနော်တို့ တရားဝင်သုံးတာ အဲဒီအကောင့်မဟုတ်ပါဘူး၊ သုံးလည်းမသုံးဘူး ၊ Miss မြန်မာလို့ သုံးပိုင်ခွင့်မရှိဘူး၊ miss မြန်မာကို Hello Madam ကပိုင်တာ၊ စင်ကာပူကိုမေးလ်ပို့လိုက်တယ်လို့ စွပ်စွဲတယ်၊ တကယ်တော့ အဲ့ဒီပြဿနာမပေါ်ခင်က ခင်ဝင့်ဝါနဲ့ ကိုဂျွန်လွင် နဲ့ ပြဿနာအရင်ပေါ်ခဲ့တယ်၊ ခင်ဝင့်ဝါက သူတို့အေဂျင်စီက မော်ဒယ်ဆိုတာ အစကမသိခဲ့ဘူး၊ နောက်မှသိခဲ့ရတယ်။ ဒီနေ့မနက် သူက ဖုန်းဆက်လာတယ်။ ဘယ်သူက ကြားကနေပြီး ဝင်နှောင့်ယှက်တယ် မသိဘူး၊ အရင်က ပြဿနာကို သိလို့လုပ်တာလား မသိဘူး၊ ကျနော်လည်း မပြောတတ်တော့ဘူး။ အဲဒီအထဲမှာလဲ ဝေယံအောင် နာမည်ပဲပါတယ်။ ကျနော်တို့က နှစ်ယောက်ဆိုတော့ ဘာပဲလုပ်လုပ်နှစ်ယောက် စလုံးတိုင်ပင်ပြီးမှ လုပ်တယ်။ ကျနော်တို့ကို တိုက်ခိုက်တာဖြစ်မှာပါ၊ ကျနော်တို့က အဲသလို လုပ်ရမယ့်လူတွေမှမဟုတ်တာ " လို့ပေါ်ပြူလာသို့ ပြောပြကာဖြေရှင်းချက်ထုတ်ပါတယ်။ Popular Journal
Stars and Models Agency နှင့်ခင်လပြည့် ဇော်တို့ အား တိုက်ရိုက်အသရေဖျက် ရန်ကြံရွယ်ကြောင်းဦးဂျွန်လွင်ဆို
“Miss Tourism Queen International တွင် တရားဝင် ယှဉ်ပြိုင်မည့်မြန်မာနိုင်ငံကိုယ်စားပြု ခင်လပြည့် ဇော်အား မြန်မာပြည်တွင်နာမည်ဆိုးနှင့် ကျော်ကြားနေသည်ဟု ၄င်း၊ ယင်းစံချိန်မီ ပြိုင်ပွဲဝင်ရောက်ယှဉ်ပြိုင်ရန် အရည်အချင်းမပြည့် မီပါဟု ၄င်း၊ မြန်မာနိုင်ငံကိုယ်စားပြု ရွေးချယ်ရာတွင် တရားမျှတာမှု မရှိသည့် အပြင် ရွေးချယ်ရန်တာဝန်ကျသည့်အေဂျင်စီကိုလည်း တရားဝင်လိုင်စင်မရှိဟု၎င်း စင်ကာပူနိုင်ငံရှိ Miss Tourism Queen International ကျင်းပရေး ဒါရိုက်တာထံသို့အသေရေဖျက်စွပ်စွဲ ပေးပို့ တိုင်ကြားထားသော ရေးသားချက်များကို အောက်ပါ ပိုစ့် တွင် ခင်လပြည့် ဇော်အား အားပေးနေကြသော ပရိသတ်ကြီးများကို ဖတ်ရှုစေလိုပါသည်။ရေးသားပေးပို့ သူဧ။် အမည်မှာ ဦးဝေရန်အောင် (National Director , Miss Supranational Myanmar,Miss Grand Myanmar) ဖြစ်ပြီး လိပ်မူထားသည့်Email မှာ [email protected] ဖြစ်သည်။အောက်ပါရေးသားချက်များသည် Stars and Models Agency နှင့်ခင်လပြည့် ဇော်တို့ အား တိုက်ရိုက်အသရေဖျက် ရန်ကြံရွယ် ဖန်တီး ထားသည့် ရေးသားချက်များသာ ဖြစ်ကြောငိး အသိပေးလိုပါသည်[https://www.facebook.com/john.lwin.9/posts/10202381244120767]”ဟုဦးဂျွန်လွင်ကသတင်းပေးပို့ မျှဝေလာပါသည်။
Samsung လည်း ရွှေရောင် Galaxy S4 ထုတ်လုပ်
Samsung Galaxy S4 ကိုပဲ ရွှေရောင် ဗားရှင်းအဖြစ် Samsung တို့ ထုတ်လုပ်တော့မှာ ဖြစ်ပါတယ်။ အရှေ့ အလယ်ပိုင်း ကိုယ်စားပြု Samsung Gulf မှ အာရေဗိယျ ဘာသာနဲ့ ကြေညာလိုက်တဲ့ သတင်းနဲ့ ဓာတ်ပုံပါ။ ၎င်းတို့ Facebook Page မှာ ဖြစ်ပါတယ်။
ရွှေရောင်ကော၊ ရွှေရောင်နဲ့ ပန်းရောင် ရောစပ်ထားတဲ့ အရောင် ကိုကော မြင်တွေ့ရမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ အတွင်း Specification များကတော့ ထူးထူးခြားခြားပြောင်းလဲသွားမယ့် အနေအထားတော့ မရှိနိုင်ပါဘူး။ အပြင် အခွံအရောင်က ပြောင်းလဲသွားခြင်း ဖြစ်ပါတယ်။ အရှေ့ အလယ်ပိုင်းမှာ ကရေနံသူဌေး နိုင်ငံများဖြစ်တဲ့ ဆော်ဒီ၊ ယူအေအီးတုိ့အတွက် ပိုမို ရည်ရွယ်တဲ့ ဖုန်း ဖြစ်ဖို့ များပါတယ်။ iPhone 5S ကို ရွှေရောင်မြင်တွေ့ရ မှုနဲ့ အတူ HTC One ကလည်း ရွှေရောင် ထုတ်လုပ်မယ့်သတင်း ထွက်ပေါ်လာပြီး Samsung လည်း ဒုတိယ လိုက်လာ ပါတယ်။
ရွှေရောင် Samsung Galaxy S4 ကို လပိုင်းအတွင်း မြင်တွေ့ရဖွယ် ရှိကြောင်း သိရပါတယ်။
ရွေးချယ်ခွင့်ရခဲ့မယ်ဆိုရင် Sony Xperia Z1 Vs LG G2
စက်တင်ဘာလအစောပိုင်း ဘာလင်မှာ မိတ်ဆက်ပွဲထုတ်သွားတဲ့ Sony တို့
ရဲ့ ရေဆိုခံ စီးရီးတွေထဲကနောက်ထပ် မျိုးဆက်သစ် ဖြစ်တဲ့ Xperia Z1 နဲ့ ပြီးခဲ့တဲ့ သြဂုတ်လမှာ မိတ်ဆက်ပွဲထုတ်သွားတဲ့ အခု စက်တင်ဘာလ
ဈေးကွက်မှာ ဖြန့်ချိမယ့် LG G2 ရွေးချယ်ခွင့် ကိုယ်စီရခဲ့မယ်ဆိုရင်။
Sony ရဲ့  Xperia Z1 မှာမျက်နှာပြင်အရွယ်အစား ၅လက်မနဲ့ထွက်ရှိထားပြီး Resolution 1920x1080 TFT Capacitive touchscreen မျက်နှာပြင်နှင့် 441ppi ရုပ်ထွက်စွမ်းဆောင်နိုင်တယ်။
LG G2 မှာတော့ Xperia Z1 ထက်မျက်နှာပြင်ပိုမိုကျယ်ပြန့် တဲ့ ၅.၂ လက်မ အရွယ်အစားနဲ့ Resolution 1920x1080 LCD Capacitive touchscreen မျက်နှာပြင်အသုံး ပြုထားပြီး 424ppi ရုပ်ထွက်အထိကြည်လင်ပြတ်သားစွာ
ဒါကြောင့် မျက်နှာပြင်ကြီးတာတစ်ခုတည်းကိုပဲ ကြည့်ပြီးရွေးမယ်ဆိုရင်
LG G2 က နှစ်လက်မသာနေတာတယ်ဆိုပေမယ့် မျက်နှာပြင်ကြည်လင်မူ
ppi ကိုကြည့်ရင် Xperia Z1 ကသာနေပါတယ်။
ပြီးတော့ touch ရွေးချယ်မူအပိုင်းမှာ LG G2 မှာက LCD ကိုသုံးထားပေမယ့်
Sony ရဲ့  TFT မျက်နှာပြင်ကိုတော့ ယှဉ်နိုင်ဖို့မလွယ်ပါဘူး။မျက်နှာပြင်မှာ
တူညီတဲ့စွမ်းဆောင်ရည်တွေဖြစ်တဲ့ Chipset ကို Snapdragon 800 နှင့် CPU ကိုလည်း Quad-core 2.2 GHz Krait 400 အသုံးပြုထားပါတယ်။
GPU ပါဝင်မူအပိုင်းမှာလည်းတူညီ နေပြီး Adreno 330 အသုံးပြုထား ပါတယ်။
RAM 2GB အဖြစ်နှစ်ခုလုံးအတွက်ပါဝင်မူတူညီနေတယ်ဆိုပေမယ့် Z1 မှာ internal memory 32GB အသုံးပြုနိုင်မှာဖြစ်ပြီး G2 မှာက 16GB နှင့် 32GB နှစ်မျိုး ရွေးချယ်မူပေးထားပါတယ်။
အပို memory အနေနဲ့ထပ်တိုးအသုံးပြုလို့ရအောင် လုပ်ဆောင်ပေးထား တာက Z1 ကသာနေတာကို မြင်တွေ့ရမှာဖြစ်ပြီး 64GB အထိထပ်တိုး အသုံးပြုနိုင်မူက မျက်စိကျစရာဖြစ်နေပါတယ်။
OS ပိုင်းမှာ 4.2 JellyBean ချင်းတူညီနေတယ်။စွမ်းဆောင်ရည်တွေလည်း
ကွာဟမူမရှိဘူး။ဒါပေမယ့် Memory သိုလှောင်မူအပိုင်းမှာ များများအသုံးပြု ချင်သူတွေအနေနဲ့ Z1 ကရွေးချယ်ဖို့ သင့်တော်နေတာ ထပ်ပြီးမြင်တွေ့ရပြန်
ကင်မရာရွေးချယ်မူမှာ ပြောစရာရှိတာက Sony ပါ။ပြီးခဲ့တဲ့ စီးရီးတွေတုန်း
ကလည်း ကင်မရာအသားပေးထုတ်ထားတာဆိုတော့ ဒီတစ်ခါပါဝင်လာတဲ့
20.7MP ကသိပ်တော့မထူးခြားပါဘူး။ဒါပေမယ့် သာမန်စမတ်ဖုန်းတစ်လုံးမှာ
အကောင်းဆုံးအသုံးပြုထားပြီး လုံလောက်တဲ့ 13MP နဲ့ယှဉ်ရင် Sony က
သို့ပေမယ့် LG G2 အနေနဲ့ 13MP အသုံးပြုထားတာက တန်းမြင့်ဖုန်းတွေမှာ လုံလောက်တဲ့အနေအထားတစ်ခုပါ။Auto focus,LED Flash,Video Record တွေမှာနှစ်မျိုးစလုံးကတူညီနေသလို ကင်မရာ Features အပိုင်းမှာလည်းကွာဟမူကြီးကြီးမားမား မြင်တွေ့ရခြင်းမရှိပါဘူး။
ရှေ့ကင်မရာအသုံးပြုမှုမှာတော့ Z1 မှာ 2MP နှင့် G2 မှာ 2.1MP အသုံးပြုထားသလို အရည်သွေးပိုင်းအနေနဲ့ [email protected] ကတူညီနေပါတယ်။
ဒါကြောင့်ကင်မရာရွေးချယ်မူအပိုင်းမှာ Features စွမ်းဆောင်ရည်တွေက တူညီနေတယ်ဆိုပေမယ့် MP ရွေးချယ်မူအပိုင်းမှာ Z1 ကသာလွန်တယ်ဆိုပေ
မယ့် 13MP ကလည်းမနိမ့်သလို ရွေးချယ်ဖို့လုံလောက်တဲ့ အနေအထားပါ။
ဖုန်းတစ်လုံးမှာအရေးကြီးတဲ့ ဘက်ထရီသက်တမ်းတာရှည်ခံမှုမှာတော့ 3000 mAh ပမာဏအသုံးပြုမူက တူညီနေပြီး စမ်းတပ်မှုအပိုင်းမှာ Z1 က Stand by အနေနဲ့ ၈၈၀ နာရီအသုံးခံမှာဖြစ်ပြီး talk time ၁၃ နာရီ နှင့် Music player အတွက် နာရီ ၁၁၀ အထိအသုံးခံနိုင်တာကိုမြင်တွေ့ရပါတယ်။
LG G2 ရဲ့ ဘက်ထရီ အသုံးခံမှုကြာမြင့်ချိန်ကို စမ်းတပ်ဖော်ပြခြင်း မရှိပေမယ့် Non-removable Li-Ion 3000 mAh battery တူညီနေတာက ဘက်ထရီစွမ်းဆောင်မူအပိုင်းမှာကြီးမားတဲ့ ကွာဟမူရှိမယ်မထင်ပါဘူး။
ကွန်ယက်ချိတ်ဆက်မူအပိုင်းမှာ 2G,3G နဲ့နောက်ဆုံးအရေးကြီးတဲ့ 4G ထောက်ပံ့ပေးနိုင်မှုမှာပါ အမျိုးအစား နှစ်ခုလုံး အတွက် တူညီနေတာက စိတ်ကြိုက်ရွေးချယ်အသုံးပြုလို့အဆင်ပြေစေမှာပါ။
နှစ်ခုစလုံးကိုခြုံငုံ သုံးသပ်ကြည့်မယ်ဆိုရင် စွမ်းဆောင်ရည်အပိုင်းမှာ ကွာဟမူကြီးကြီး မားမားမြင်တွေ့ ရခြင်းမရှိပေမယ့် ကင်မရာကြိုက်သူနှင့် memory သိုလှောင်မူအပိုင်းမှာတော့ ရေစိုခံ Sony Xperia Z1 ကရွေးချယ် ဖို့နှစ်သက်စရာပါ။
နိုင်ငံတကာအနှံ့ဖြန့်ချိမှာဖြစ်ပြီး ဈေးနှုန်းအနေနဲ့ LG G2 က version နှစ်မျိုး အတွက် $599/$629 လောက်ကျသင့်မှာဖြစ်ပြီး Sony Xperia Z1 ကတော့ အမေရိကန်ဒေါ်လာ ၆၅၀ လောက်အနည်းဆုံးကျသင့်မယ်လို့ ခန့်မှန်းထား ပါတယ်။
ရွေးချယ်ခွင့်ရခဲ့မယ်ဆိုရင်ရေစိမ်ခံ Sony Xperia Z1 လား၊LG G2 လား....၊၊၊၊၊
(အပြင်မှာမိုးတွေတော့ရွာနေတယ် ပြေးရလွှားရနဲ့............. ပြီးရင်မကြာခင် ရောက်ရှိလာတော့မယ့် စိုထိုင်းမူများမယ့် ဆောင်းရာသီ)
တရုတ်ပြည် လွတ်လပ်ကုန်သွယ်ဇုန်တွင် Facebook/Twitter အသုံးပြုခွင့် ရမည်
ကမ္ဘာမှာ တရုတ်ပြည်ဟာ အင်တာနက် ပေါ်လစီ အတင်းကြပ်ဆုံး နိုင်ငံ ဖြစ် ပါတယ်။ ၂၀၀၉ ခုနှစ်က စလို့ Facebook နဲ့ Twitter အသုံးပြုခွင့်ကို တရုတ်ပြည်မှာ တားမြစ်ပိတ်ပင်ခဲ့ပြီး ဖြစ်ပါတယ်။ Google ကိုလည်း Feature အချို့ သာ ဖွင့်ထားပေးပြီး အသုံးပြုစေတဲ့အခြေအနေ တစ်ခု ဖြစ်ပါ တယ်။ ခုတော့ Free Trade Zone အတွက် ဖွင့်ပေးပါတော့ မယ်။
သို့ပေမယ့် ဝမ်းနည်းစရာက ယင်းဖွင့်ပေးမှုဟာ နိုင်ငံခြားသားတွေ အတွက် ပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ Free Trade Zone တစ်ခု သတ်မှတ်ပြီး ပြည်ပမှ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံ လိုသူများကို စီးပွားရေး လွတ်လပ်စွာ လုပ်ကိုင်စေ မယ့် နေရာဒေသ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီအတွက် ဘယ်နေရာတွေ ဖြစ်မယ် ဆိုတာကိုတော့ မကြေညာသေး ပါဘူး။ Facebook တို့၊ NY Time တို့ကနေ သတင်းအချက်အလက်ကို လွတ်လပ်စွာ ဖတ်ရှုခွင့် မရှိတဲ့ နိုင်ငံခြားသား တစ်ယောက် အနေနဲ့ တရုတ်ပြည်မှာ စီးပွားရေး လုပ်ရန် ဝံ့ရဲမှာ မဟုတ်ကြောင်း တရုတ်ပြည်မ အစိုးရ တာဝန်ရှိသူ တစ်ဦးက ဆိုပါတယ်။
လက်ရှိ တရုတ်ပြည်ဟာ ကမ္ဘာအကောင်းဆုံး Firewall မှာ အသုံးပြုနေ တဲ့ နိုင်ငံလို့လည်း လူသိများ၊ ကျော်ကြား ပါတယ်။ အကြောင်းကတော့ တရုတ်ပြည်သို့ ဝင်ရောက်တဲ့ အင်တာနက်လိုင်းများကို ဖြတ်တောက်၊ တားဆီးမှုများကို သေချာ ပြုလုပ်ထားလို့ပါ။ ဟောင်ကောင်နဲ ထိုင်ဝမ် ကတော့ တရုတ်ပြည်မ နဲ့ စာရင် လွပ်လပ်ပြီး Social Media အသုံးပြုခွင့် ရှိပါတယ်။ Facebook/ Twitter ကို တစ်နိုင်ငံလုံး အသုံးပြုစေနိုင်ရန် အတွက်လည်း တောင်းဆို ဆွေးနွေးတဲ့ တရုတ် ခေါင်းဆောင်ကြီးများလည်း ရှိနေကြောင်း သိရပါတယ်။
အောင်ခမ်း ( TSJ Team )
တရုတ်နိုင်ငံရွှေကြက်ဖရုပ်ရှင်ပွဲတော်တွင်တွေ့ ရတဲ့စိုင်းစိုင်းခမ်းလှိုင် နှင့် သက်မွန်မြင့်
မြန်မာ့ရုပ်ရှင်ထူးချွန်ဆု၃ဆုရ အာဒမ်ရယ် ဧ၀ရယ် ဒသရယ်
လာရောက်ပြသရန်နှင့် ပွဲတက်ရောက်ရန် ရွေးချယ်ဖိတ်ခေါ်တဲ့
အစည်းအရုံးဦးအောင်ခိုင်တို့နဲ့ အတူ Heart 'N' Soul Production
သက်မွန်မြင့်တို့ စက်တင်ဘာ၂၄ရက်နေ့ ညနေတွင် ရန်ကုန်မြို့မှ စတင်ထွက်ခွာစဉ်ကဦးအေးကြူလေး၊ဦးခင်မောင်ချင်းတို့လေဆိပ်တွင် ပို့ဆောင်တဲ့ပုံရိပ်နှင့်တရုတ်နိုင်ငံရွှေကြက်ဖရုပ်ရှင်ပွဲတော်တွင်တွေ့ ရတဲ့
တစ်နေ့တာအတွက် စိတ်ခွန်အား စကားစု ၁၀ ခု
သင့်ကို မေ့မရလောက်အောင် အကောင်းဆုံး တုန့်ပြန်ပေးလိုက် -Steve Martin
အသက်ငယ်စဉ် အခွင့်အရေးကြီးများ ရတာ ကောင်းတယ်။ အကြောင်းကတော့ ဆုံးရှုံးနိုင်ချေနည်းလို့။ ဖြစ်သမျှ၊ ရသမျှ ကိုယ့်အတွက် အမြတ်ချည်းပဲ။ - Amy Poehler
အရှုံးကို ကျောခိုင်းပြီး လှည့်ထွက်လိုက်ချိန် ကိုယ်အကောင်းဆုံး လုပ်ဖြစ်ခဲ့တာကို ပြန်တွေးဖြစ်တယ်။ သို့ပေမယ့် အောင်မြင်တယ်လို့ ယုံကြည်ပြီး လှည့်ထွက်လာတဲ့ အရာတစ်ခုအတွက်ကတော့ ဘာလုပ်လို့ ဘာကိုင်ရမှန်း မသိအောင် ဆွံ့အသွားတတ်တယ်။ - Louis C.K.
တစ်စုံတစ်ခု ဖြစ်လာရုံလေးပဲ မဖန်တီးနဲ့။ အကြောင်းက လူတိုင်းလုပ်နိုင်တယ် သို့မဟုတ် လွယ်ကူနေလို့ပါ။ ဒါဆို သင်မပျော်တော့ဘူး။ အမှန်တကယ်ကို လုပ်ချင်၊ရချင်စိတ် ပြင်းထန်တဲ့ အရာတစ်ခုကို အတားအဆီး များကြားကနေ မဖြစ်ဖြစ်အောင် လုပ်ယူ ကြိုးစားရမှာ ဖြစ်ပါတယ။် - Kristen Wiig
အလုပ်ကြိုးစား၊ ကြင်ညာတတ်ပါစေ၊ သင့်အတွက် တူမတူနဲ့ ရလဒ်ကောင်းတွေ ပေးလိမ့်မယ်။ - Conan O’Brien
ကျနော်ဟာ အမြဲတမ်း အချိန်မှန်၊ နေရာမှန်ကို ရောက်တယ်။ အကြောင်းကတော့ အဲ့နေရာကို ရောက်အောင် ကိုယ့်ကိုယ်ကို မောင်းနှင်ထားလို့ပဲ။ - Bob Hope
ကိုယ် လုပ်ရတဲ့ အရာမှန်သမျှကို ချစ်မြတ်နိုးပါ။ အကောင်းမြင်ပေးပါ။ ယှဉ်ပြိုင်မှုဆိုတာ ယနေ့မှာ ရှားပါးလှတဲ့ ကုန်ပစ္စည်းတစ်ခုမို့၊ စိန်ခေါ်နေသူတွေကို လက်ကမ်းလို့ခေါ်ပါ။ - Jon Stewart
အောင်မြင်ချင်တယ်ဆိုရင် အောင်မြင်ချင်တဲ့ ဆန္ဒက ကျရှုံးမှုအပေါ် ကြောက်ရွံ့ မှုထပ် အင်အား ကြီးမား နေရမယ်။ - Bill Cosby
ရေလွှာချောရဲ့  ထိပ်မှာနေပြီး တွေးပြီး ကြောက်နေသူတဲ့ ကလေးလို မဖြစ်ရဘူး။ ချောစီးပြီး ရေပေါ်ကျအောင် စီးဆင်း နိုင်ဖို့လိုတယ်။ - Tina Fey
ကျနော်ကတော့ ကိုယ်ချစ်တဲ့ တစ်စုံတစ်ခု၊ တစ်စုံတစ်ယောက် အပေါ် ကျရှုံးခြင်းက ကိုယ်မုန်းနဲ့ တစ်စုံတစ်ခု/တစ်ယောက် အပေါ် အောင်နိုင်ခြင်းထပ် ပိုမြတ်တယ်လို့ ရိုးရိုးသားသား မြင်မိပါတယ်။ - George Burns
ကမ္ဘာမှာ မရှိသေးတဲ့ အရာတစ်ခုခုကို ခများ ဖန်တီးသယ်ဆောင်လာသင့်တယ်။ ရုပ်ရှင် ဖြစ်ဖြစ်၊ စားပွဲတစ်လုံးပဲ ဖြစ်ဖြစ်၊ ပန်းခြံပဲ ဖြစ်ဖြစ် ဘယ်အရာကိုမဆိုပေါ့။ ပြီးရင် အဲ့နောက်မှာ ထိုင်ပြီး ဒါငါလုပ်ခဲ့တယ်လို့ ပြောပြလိုက်ရုံ ပါပဲ - Ricky Gervais
ဆေးရုံတွင် စစ်ဆေးပြီးနောက် နှစ်တန်းကျောင်းသူ တစ်ဦး အဓမ္မပြုကျင့်ခံရကြောင်း အမှုဖွင့်
နှစ်တန်းကျောင်းသူတစ်ဦးကို ဆေးရုံသို့ ပြသခဲ့ရာတွင် အဓမ္မပြုကျင့်ခြင်းခံထားရကြောင်း မှတ်ချက်ပေးခဲ့သဖြင့် ပြစ်မှု ကျူးလွန်သူအား အရေးယူပေးရန် အဖွားဖြစ်သူက စက်တင်ဘာ ၂၄ ရက်တွင် ဒဂုံဆိပ်ကမ်းရဲစခန်း၌ အမှုဖွင့် တိုင်တန်းထားသည်။
အမှုကို ဒဂုံဆိပ်ကမ်းမြို့နယ်နေသော အဓမ္မပြုကျင့်ခံရသည်ဟုဆိုသော ကလေးငယ်၏ အဖွားတော်စပ်သူ ဒေါ်---- (၆၀)နှစ်က အမှုဖွင့် တိုင်တန်းထားခြင်းဖြစ်သည်။
စက်တင်ဘာ ၁၈ ရက် ည ၉ နာရီအချိန်က သူမ၏ မြေးဖြစ်သူ မ-----(၈)နှစ်၊ ဒုတိယတန်း (-----၊ ဒဂုံတောင်) ၏ မိန်းမကိုယ်တွင် သွေးများ ထွက်နေသည်ကို တွေ့ရှိခဲ့ရ၍ “မျှော့” ကောင်ဝင်နေသည်ဟု ထင်မြင်မိခဲ့သည်ဟုလည်း အဖွားဖြစ်သူက ရဲအားပြောပြထားသည်။
ထို့ကြောင့်ပင် ကလေးငယ်အား သင်္ဃန်းကျွန်း စံပြဆေးရုံမှတစ် ဆင့် မြောက်ဥက္ကလာ ဆေးရုံသို့ သွားရောက်ပြသခဲ့ရာတွင် မြေးဖြစ်သူမှာ အဓမ္မပြုကျင့်ခြင်းခံထားရသည်ကို သိရှိခဲ့သည်ဟု ဆိုထားသည်။
ထို့ကြောင့် မြေးငယ်ဖြစ်သူအား မေးမြန်းရာတွင် စက်တင်ဘာ ၁၈ ရက်ညဦးပိုင်း အချိန်က အိမ်နီးချင်းဖြစ်သူ မောင်----- (၁၅) နှစ်က လမ်းအတွင်းရှိ လူမနေသော အဆောက်အအုံအတွင်းသို့ ခေါ်ဆောင်သွားပြီး သားမယားအဖြစ် တစ်ကြိမ် ပြုကျင့်ခဲ့ကြောင်း ပြောပြထားသည်ဟုလည်း အဖွားဖြစ်သူက အမှုဖွင့်ရာတွင် ထွက်ဆိုထားသည်။
ယင်းကြောင့် မြေးငယ်ဖြစ်သူအာ အဓမ္မပြုကျင့်ခဲ့သူ မောင်------(၁၅)နှစ် အား အရေးယူပေးရန် စက်တင်ဘာ ၂၄ ရက်တွင် စွပ်စွဲ အမှုဖွင့် တိုင်တန်းထားခြင်းဖြစ်သည်ဟု ရဲဌာနက ဆိုသည်။
ယင်းတိုင်တန်းမှုကို ဒဂုံဆိပ်ကမ်းရဲစခန်းက (ပ) ၃၂၈/၂၀၁၃ဖြင့် အမှုဖွင့်ပြီး စွပ်စွဲခံထားရသူအား ရဲစခန်းတွင် ထိန်းသိမ်းစစ်ဆေးနေပြီး ပြစ်မှုထင်ရှား ပါကလည်း ပုဒ်မ ၃၇၆ ဖြင့် တရားစွဲတင်ပို့မည်ဟု တိုင်းရဲဌာနမှ သိရသည်။
Posted From Mizzima - News in Burmese
မြန်မာတိုင်းမ် ဖျက်သိမ်းရန် လျှောက်ထားမှု စတင်ကြားနာ
တရားရုံး လာရောက်သည့် မစ္စတာရော့စ်ဒန်ကလေ (ဓာတ်ပုံ – ထက်နိုင်ဇော် / ဧရာဝတီ)
ပြည်တွင်းတွင် ထုတ်ဝေလျက်ရှိသော မြန်မာတိုင်းမ် ဂျာနယ်ကို ပိုင်ဆိုင်သည့် Myanmar Consolidated Media (MCM) Co., Ltd. ကုမ္ပဏီကို ဖျက်သိမ်းရန် လျှောက်ထားမှုကို ယနေ့ အနောက်ပိုင်း ခရိုင်တရားရုံးတွင် စတင်ကြားနာကြောင်း သတင်းရရှိသည်။
MCM ကုမ္ပဏီ အစုရှယ်ယာရှင်များဖြစ်သည့် ဒေါက်တာတင်ထွန်းဦးနှင့် ဒေါက်တာခင်မိုးမိုးတို့က ကုမ္ပဏီဖျက်သိမ်းပေးရန် သြဂုတ်လ ၁၂ ရက်နေ့ ရန်ကုန်တိုင်း ၊ ကျောက်တံတားမြို့နယ်ရှိ အနောက်ပိုင်းခရိုင် တရားရုံးတွင် လျှောက်ထားခဲ့ပြီး ယနေ့တွင် တရားရုံးက ပထမဆုံး ရုံးချိန်းအဖြစ် အမှု စတင်စစ်ဆေး ကြားနာကြောင်း၊ ဒေါက်တာတင်ထွန်းဦး နှင့်ဒေါက်တာခင်မိုးမိုး တို့ဘက်မှ ရှေ့နေဦးကျော်မြင့်၊ ဦးလှရွှေတို့တက်ရောက်ပြီး မြန်မာတိုင်းမ် အယ်ဒီတာချုပ် မစ္စတာ ရော့စ်ဒန် ကလေ နှင့်ရှေ့နေ ဦးအောင်ဆန်းဦးတို့ တက်ရောက်ခဲ့ကြောင်း၊ အမှုကို အောက်တိုဘာ လ ၁၀ ရက်နေ့ ထပ်မံ စစ်ဆေးကြားနာမည်ဖြစ်ကြောင်း သိရှိရသည်။
ယနေ့ စစ်ဆေးမှုတွင် မစ္စတာရော့စ်ဒန်ကလေ၏ရှေ့နေဦးအောင်ဆန်းဦးက မြန်မာတိုင်းမ် ကုမ္ပဏီဖျက်သိမ်းရန် လျှောက် ထားမှု သည် ဥပဒေနှင့်မညီသဖြင့် ကန့်ကွက်သည်ဟု တရားရုံးတွင် ထွက်ဆိုကြောင်း သိရှိရသည်။
“ဒေါက်တာတင်ထွန်းဦးတို့ဘက်က လျှောက်ထားချက်ဟာ ကုမ္ပဏီများအက်ဥပဒေနဲ့ ညီညွှတ်မှု မရှိတဲ့အတွက် စရိတ်နဲ့ တကွ ပလပ်ပေးဖို့ ကန့်ကွက်ရတာပါ။ ကန့်ကွက်ချက်ကို တဖက်က လက်မခံတဲ့အတွက် တရားရုံးက ရုံးချိန်း ထပ်ချိန်း လိုက်တယ်´´ဟု ရှေ့နေ ဦးအောင်ဆန်းဦးက ပြောဆိုသည်။
MCM ကုမ္ပဏီတွင် ဒေါက်တာတင်ထွန်းဦးနှင့် ဒေါက်တာခင်မိုးမိုးတို့က ရှယ်ယာ ၅၁ ရာခိုင်နှုန်းပိုင်ဆိုင်ပြီး ၄၉ ရာခိုင်နှုန်းကို နိုင်ငံခြားသား မစ္စတာ ရော့စ်ဒန်ကလေ က ပိုင်ဆိုင်ကြောင်း၊ ရှယ်ယာကိစ္စ ညှိနှိုင်း ဆောင်ရွက်၍ မရတော့ သဖြင့် တရားရုံး ၏ အဆုံးအဖြတ်ဖြင့် ကုမ္ပဏီကို ဖျက်သိမ်းရန် စီစဉ်ရခြင်း ဖြစ်ကြောင်း ဒေါက်တာ ခင်မိုးမိုးက ဧရာဝတီသို့ ပြောဆို ခဲ့သည်။
MCM ကုမ္ပဏီတွင် ၀န်ထမ်း ၃၀၀ ခန့် အထိရှိပြီး ကုမ္ပဏီဖျက်သိမ်းခံရပါက ၀န်ထမ်းများ အလုပ်လက်မဲ့ဖြစ်ကာ ၀န်ထမ်း မိသားစု တထောင်ခန့်၏ စားဝတ်နေရေးပါ ထိခိုက်နိုင်သောကြောင့် အစုရှယ်ယာရှင် ဒေါက်တာတင်ထွန်းဦးနှင့် ဒေါက်တာ ခင်မိုးမိုးတို့၏ ကုမ္ပဏီ ဖျက်သိမ်းရန် လျှောက်ထားချက်ကို မြန်မာတိုင်းမ်ဂျာနယ်မှ အကြီးအကဲများက ကန့်ကွက်သော စာတစောင် တရားရုံးထံသို့ ပေးပို့လိုက်ကြောင်း မြန်မာတိုင်းမ်ဂျာနယ် စာတည်းမှူး ဦးဇော်မြင့်က ဧရာဝတီသို့ ပြောသည်။
“၀န်ထမ်းအားလုံးက ကန့်ကွက်စာ တင်ချင်တာ။ ဒါပေမဲ့ ရှေ့နေက လူကြီးပိုင်း တွေတင်ရင် လုံလောက်ပါတယ် ဆိုလို့ ဌာန လူကြီး ၁၀ ယောက် လောက်က ကျမ်းကျိန်ပြီးတော့ ဒီနေ့တရားရုံး ကိုတင်လိုက်တယ်။ တရားရုံးက မှတ်တမ်း တင်ထား ပါ့မယ်လို့ ပြောတယ်´´ဟု စာတည်းမှူး ဦးဇော်မြင့်က ဆိုသည်။
ဧရာဝတီသတင်းဌာနက ဒေါက်တာတင်ထွန်းဦး၊ ဒေါက်တာခင်မိုးမိုးနှင့် ရှေ့နေများကို ကြိုးစားဆက်သွယ်ခဲ့သော်လည်း အဆက်အသွယ် မရခဲ့ပေ။
MCM ကုမ္ပဏီကို ၂၀၀၀ ပြည့်နှစ်တွင် ထောက်လှမ်းရေးအကြီးအကဲ ဗိုလ်မှူးချုပ်သိန်းဆွေ၏ သားဖြစ်သူ ဦးဆန်နီဆွေနှင့် သြစတြေးလျ နိုင်ငံသား မစ္စတာ ရော့စ် ဒန်ကလေ တို့က တည် ထောင်ခဲ့သည်။
ကျောက်ဖြူ မဒေးကျွန်း ဆန္ဒပြ ခေါင်းဆောင်များကို စီရင်ချက်ချ
ကျောက်ဖြူမြို့နယ် တရားရုံး အနီးတွင် ယနေ့တွေ့ရသော ဆန္ဒပြ ဒေသခံများ (ဓာတ်ပုံ – Thaung Tin / Facebook)
ရခိုင်ပြည်နယ် ကျောက်ဖြူဒေသ မဒေးကျွန်း၌ ရွှေ သဘာဝ ဓာတ်ငွေ့စီမံကိန်းကြောင့် နစ်နာမှုများအတွက် ဆန္ဒပြသူများအား ဦးဆောင်သည်ဟူသော စွပ်စွဲချက်ဖြင့် တရားစွဲဆိုခံထားရသူ ၁၀ ဦးကို ကျောက်ဖြူ မြို့နယ်တရားရုံးက အလုပ်ကြမ်းနှင့် ထောင်ဒဏ် ၃ လစီ ချမှတ် လိုက်ကြောင်း သိရသည်။
ထောင်ဒဏ်ချမှတ်ခံရသူများသည် ပုဒ်မ ၁၈ ဖြင့် တရားစွဲဆို ထောင်ချခံရခြင်း ဖြစ်ပြီး ယခုအခါ ကျောက်ဖြူ ထောင်သို့ ပို့လိုက်ပြီ ဖြစ်ကြောင်း၊ မိသားစုဝင်များနှင့် တွေ့ခွင့် ပေးထားကြောင်း ထောင်ချခံရသည့် ဦးထွန်းကြည် ၏ အစ်မဖြစ်သူက ဧရာဝတီ ကို ပြောသည်။
ထောင်ချခံရသူများမှာ ဦးထွန်းကြည်၊ ဦးမောင်ယဉ်လှ၊ ကိုမောင်မောင်မြင့်၊ ဦးအောင်သိန်းထွန်း၊ ဦးမောင်ဖြူသီး၊ ဦးထွန်းခင်နု၊ ကိုမောင်မောင်စိုး၊ ဦးမောင်ထွန်းအေး၊ ကိုမျိုးမင်းနိုင် စသည်တို့ ဖြစ်သည်။
၎င်းတို့အား ထောင်ဒဏ်ချမှတ်ခြင်းကို မကျေနပ်သည့်အတွက် ချက်ချင်းပြန်လွှတ်ပေးရန် ဒေသခံ ၄၀၀ ၀န်းကျင်က ယနေ့ တွင် ဆန္ဒပြ တောင်းဆိုနေကြကြောင်း၊ ထိုသူများအား ပြန်လွှတ်မပေးပါက မဒေးကျွန်းပေါ်ရှိ ကျေးရွာအားလုံးက ဒေသခံများ ကိုပါ ဖမ်းဆီးထောင်ချရန် တရားရုံး အနီးတွင် ဆန္ဒထုတ်ဖော်နေကြကြောင်း ကျောက်ဖြူမြို့ခံများက ပြောသည်။
“မဒေးကျွန်း ဒေသ ဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် ဆန္ဒပြတောင်းဆိုတာက တကျွန်းလုံးဖြစ်တယ်၊ ဒီတော့ အဲဒီ ဆန္ဒပြမှုနဲ့ ဖမ်းဆီး အပြစ် ပေးတယ်ဆိုရင် ဆန္ဒပြခဲ့တဲ့ ကျေးရွာသားတွေ အားလုံးကိုပါ ဖမ်းဆီး ထောင်ချပေးဖို့ ဒေသခံတွေက တရားရုံးရှေ့မှာ ဆန္ဒပြ တောင်းဆိုနေကြပါတယ်”ဟု ကျောက်ဖြူမြို့ခံ ဦးလှမျိုးကျော် က ဧရာဝတီ ကို ပြောသည်။
တရားရုံးအနီးတွင် ရဲ တပ်ဖွဲ့ဝင်များ၊ စစ်တပ်၊ မီးသတ် စသည်ဖြင့် လုံခြုံရေး အင်အား ၁၀၀ ကျော်ကို ချထားပြီး မီးသတ် ယာဉ် များကိုလည်း အသင့်အနေအထားဖြင့် ပြင်ဆင်ထားကြောင်း၊ သို့သော် အဖမ်းအဆီး မရှိသေးကြောင်း ဒေသခံများက လည်း ပြောသည်။
ဦးထွန်းကြည် အပါအ၀င် တရားစွဲဆိုခံထားရသူ ၁၀ ဦးသည် ခွင့်ပြုချက်မရဘဲ ဆန္ဒပြသည့် အတွက် ပုဒ်မ ၁၈ ဖြင့် ဒေသ ဆိုင်ရာ အာဏာပိုင်များက တရားလိုပြုလုပ်၍ ကျောက်ဖြူမြို့နယ် တရားရုံး၌ ပြီးခဲ့သည့် ဧပြီလအတွင်း တရားစွဲဆိုခဲ့ ခြင်းဖြစ် သည်။
ထိုအမှုကို စက်တင်ဘာ ၁၂ ရက်နေ့က စီရင်ချက် ချမှတ်ရန် ရက်ချိန်း သတ်မှတ်ပေးခဲ့သော်လည်း စီရင်ချက်အတွက် ရေး သားနေသည့် အချက်အလက်များ မပြီးသေးသည့် အတွက်ဟုဆိုကာ ရက်ချိန်းပြောင်းလဲခဲ့ပြီး ယနေ့တွင် အမိန့်ချခြင်း ဖြစ် သည်။
ဒေသခံများသည် မိမိတို့၏ နစ်နာ ဆုံးရှုံးမှုကို တရားဝင် ဆန္ဒထုတ်ဖော်ရန် အာဏာပိုင်များထံ ၄ ကြိမ်အထိ ခွင့်ပြုချက် တင် ခဲ့သော်လည်း ခွင့်ပြုချက် မရရှိသည့် အတွက် ဆန္ဒဖော်ထုတ်ခဲ့ကြခြင်း ဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။
ပုဒ်မ ၁၈ သည် ခွင့်ပြုချက်မရဘဲ ငြိမ်းချမ်းစွာ စုဝေးခြင်း သို့မဟုတ် ငြိမ်းချမ်းစွာ စီတန်းလှည့်လည်ခြင်း ပြုလုပ်ကြောင်း ပြစ်မှု ထင်ရှား စီရင်ခံရလျှင် ထိုသူအား တနှစ်ထက် မပိုသော ထောင်ဒဏ် ဖြစ်စေ၊ ကျပ် ၃ သောင်းထက် မပိုသော ငွေဒဏ်ဖြစ်စေ၊ ထောင်ဒဏ်၊ ငွေဒဏ် နှစ်ရပ် စလုံးဖြစ်စေ ချမှတ်နိုင်ကြောင်း ဥပဒေ ပြဌာန်းထားသည်။
ထိုပုဒ်မ ကြောင့် မိမိတို့ လိုလားချက်များကို ဆန္ဒထုတ်ဖော်နေကြသည့် မြန်မာနိုင်ငံ အနှံ့အပြားမှ ပြည်သူ အများအပြားသည် တရားစွဲဆိုခံထားရခြင်း၊ ဖမ်းဆီးခံရခြင်းများ မကြာခဏ ဖြစ်ပေါ်နေသည်။ ပုဒ်မ ၁၈ အား ဖျက်သိမ်းပေးရန် အတွက်လည်း ဆန္ဒထုတ်ဖော် တောင်းဆိုမှုများ မကြာခဏ ဖြစ်ပေါ်လျက်ရှိသည်။
ပြစ်ဒဏ်ချခံရသူများသည် ရွှေ သဘာဝဓာတ်ငွေ့ ပိုက်လိုင်းကို ဦးဆောင် တည်ဆောက်နေသည့် တရုတ် အမျိုးသား ရေနံ ကော်ပိုရေးရှင်း(CNPC) အားကန့်ကွက်သည့် အနေဖြင့် မတ်လအတွင်းက ဆန္ဒထုတ်ဖော်ခဲ့ကြစဉ် ဆန္ဒပြဒေသခံများအား ဘေးမှ ၀န်းရံ ဦးဆောင်ပေးခဲ့သူများလည်း ဖြစ်သည်။
China National Petroleum Corporation (CNPC) ရုံးတည်ရှိရာ မဒေးကျွန်းပေါ်ရှိ ကျောက်တန်း၊ ရွာမ၊ ပြိန်ရွာ၊ ပန်းထိန် ဆည် စသည့်ကျေးရွာများမှ ဒေသခံများသည် ၎င်းတို့ တောင်းဆိုချက် ၉ ချက်ကိုကြွေးကြော်၍ CNPC ရုံးရှေ့သို့ ချီတက်ဆန္ဒ ပြခဲ့ကြခြင်း ဖြစ်သည်။
သိမ်းဆည်းခံ လယ်ယာမြေ၊ ဥယျာဉ်ခြံမြေများကို နိုင်ငံတကာ စံချိန်စံညွှန်း အတိုင်း လျော်ကြေးပေးရေး၊ ကျွန်းပေါ်ရှိ ကျေးရွာ လမ်းများ ကောင်းမွန်ရန် ဆောင်ရွက်ပေးရေး၊ အလုပ်သမားကတ်ရှိသည့် ဒေသခံများ အလုပ်အကိုင် ရရှိရေးနှင့် လုပ်အား ခ ကို နိုင်ငံတကာစံ အတိုင်း ရရှိရေး၊ ကျွန်းပေါ်ရှိ လူနေအိမ်များ လျှပ်စစ်မီး ရရှိရန် လုပ်ဆောင်ပေးရေး စသည့် အချက်များ အ ပါအဝင် အချက် ၉ ချက်ကို ဒေသခံများက တောင်းဆိုခဲ့ကြသည်။
တလည်းသီးဖျော်ရည်တစ်ခွက်သောက်ခြင်းဖြင့် ချစ်စိတ်ကို မြှင့်တင်နိုင်
အိမ်ထောင်မှုသုခ အပြည့်အ၀ မရရှိဘူးဆိုရင် တလည်းသီးဖျော်ရည် တစ်ခွက်ကို သောက်လိုက်ပါလို့ ကျွမ်းကျင်သူတွေက အကြံပြုထားပါတယ်
တလည်းသီးဖျော်ရည်ဟာ အိမ်ထောင်ရှင်တွေအတွက် စိတ်ဆန္ဒကို လှုံဆော်ပေးနိုင်တဲ့ နံပါတ်တစ်ဖျော်ရည်ဖြစ်တယ်လို့ လေ့လာသူတွေက ဆိုပါတယ်။ တလည်းသီးဖျော်ရည်ဟာ အိမ်ထောင်ရှင်စုံတွဲတွေကိုပိုပြီး ချစ်ချစ်ခင်ခင်နေနိုင်စေကြောင်း လေ့လာမှုအရ သိရပါတယ်။
အကြောင်းကတော့ တလည်းသီးဖျော်ရည်မှာ အင်တီအောက်ဆီးဒင့်ဂုဏ်သတ္တိ အပြည့်ပါဝင်တဲ့အပြင် တလည်းသီးရနံ့နဲ့ အရသာကြောင့် ဖြစ်ပါတယ်။ တလည်းသီးဖျော်ရည်နှာ ပါဝင်တဲ့ ဗီတာမင်စီက တစ်နေ့တာ လိုအပ်တဲ့ပမာဏရဲ့ ၁၆% နဲ့ ဗီတာမင် B3 ၊ ပိုတက်စီယမ်၊ သဘာဝဖီနောနဲ့ ဖေလးဗိုနွိုက်တို့လည်းပါဝင်နေပါတယ်။ တလည်းသီးမှာ အမျှင်ဓာတ်ပါဝင်မှုလည်း မြင့်မားတာကြောင့် တလည်းသီးဟာ နှလုံးရောဂါဖြစ်နိုင်ချေကို လျော့ကျစေပြီး သွားချေးဖတ်မဖြစ်အောင်လည်း ကာကွယ်ပေးတယ်လို့ သိရပါတယ်။
Good Health ( ZKO )
ထူးထူးခြားခြား နဖူးပေါ်မှာ နှာခေါင်းလာပေါက်သူ (Video)
မူလက သူ့ခန္ဒာကိုယ်က သာမာန်လူတွေလိုပါပဲ၊ ကားတိုက်မူ့ဖြစ်
အပြီး ခွဲစိတ်ကုဆရာဝန်ကြီးများက သူ့ရဲ့ခန္ဒာကိုယ်ကို ကုသဖို့အ
တွက် နဖူးအောက်က အရေးပြားထဲမှာ အသားစတစ်ရှုးများကို
Classic Burma News
စွယ်စုံရအနုပညာရှင် (မောင်သူရ) ဇာဂနာက ကျန်းမာရေးကြောင့် ယခုအောက်ဆီဂျင်နဲ့ အသက်ရှုနေရပါတယ်။ ဇာဂနာ ရဲ့ကျန်းမာရေးနှင့်ပတ်သက်ပြီး လူရွှင်တော် အရိုင်းကို
ပေါ်ပြူလာဂျာနယ်မှ ဆက်သွယ်မေးမြန်းခဲ့ရာ အရိုင်းက
"ဒီမနက်မှသိတာ ၊ ဖေ့ဘုတ်ပေါ်မှာတွေ့လိုက်တာ၊ အသင်ရှုမဝဘူး၊ အဆုတ်ေ၇ာင်နေတယ်လို့ ပြောတယ်။ အခု
အောက်ဆီဂျင်ပေးထားတယ်။ ဆေးရုံတင်မှာကို မတက်ချင်ဘူးပဲ ငြင်းနေတာ။ ငြိမ်းချမ်းရေးပွဲပြီးတဲ့ညက အကောင်းပဲရှိသေးတယ်။ မနေ့ည စက်တင်ဘာ ၂၅ ရက်ညကမှဖြစ်တာ။
တစ်ယောက်တည်းနေရင်း အသက်ရှုကျပ်လာတယ်ပြောတယ်။ အခု သူ့အိမ်ကို သတင်းသွားမေးရမယ်။ " လို့ ပြောပြခဲ့ပါတယ်။
Popular JournalMyawady News
ဘယ်လိုအကြောင်းကြောင့်ပဲ ဖြစ်ဖြစ် ခေါင်းဘယ်လောက်ပဲ ကိုက်ကိုက်၊ ဘယ်လောက်ပဲ မူးမူး သဘာဝအတိုင်း ပျောက်စေတဲ့ နည်းလမ်း ရှိပါတယ်။
ယင်းကတော့ သံပုရာသီးကို အသုံးပြုခြင်း ဖြစ်ပါတယ်။ သံပုရာသီးကို နှစ်ခြမ်း ခြမ်းပြီး အတွင်းသားကို နဖူးမှာ သာသာလေး ပွတ်ပေးရုံပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ ယင်းသို့ ပွတ်သပ်ခြင်းဖြင့် တကယ်ပဲ ခေါင်းကိုက် သက်သာ ပျောက်ကင်းစေပါတယ်။
သံပုရာသီးက အအေးဓာတ်နဲ့ အနံ့က ဦးနှောက်ကို လန်းဆန်းစေပြီး ခေါင်းကိုက်ဝေဒနာ ပျောက်ကင်းစေတယ်လို့ လေ့လာတွေ့ရှိထားကြောင်း သိရပါတယ်။
Aung Kham ( International news for myanmar )
အသင့်ဖျော် ကော်ဖီနှင့် လက်ဖက်ရည်မှ အာဟာရဓာတ် မရနိုင်ဟု ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးဆို
မြန်မာနိုင်ငံတွင် သောက်သုံးမှု များပြားလှသော အသင့်ဖျော် ကော်ဖီနှင့် လက်ဖက်ရည်များကို သောက်သုံးခြင်းဖြင့် လိုအပ်သော အာဟာရဓာတ်များ မရရှိနိုင်ကြောင်း မွေးမြူရေး၊ ရေလုပ်ငန်းနှင့် ကျေးလက်ဒေသ ဖွံ့ဖြိုးရေးဝန်ကြီးဌာန ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး ဦးအုန်းမြင့်က ပြောကြားသည်။
မိတ္ထီလာမြို့နယ် ကံဦးနယ်မြေ ကျီတော်ကုန်း ရပ်ကွက်ရှိ ဝင်းမေတ္တာ နို့စားနွား မွေးမြူရေးခြံသို့ ပြီးခဲ့သည့် စက်တင်ဘာလ ၂၄ ရက်နေ့က ရောက်ရှိစဉ် ဝန်ကြီးက ယင်းသို့ ပြောကြားခဲ့ခြင်း ဖြစ်ကြောင်း ဝန်ကြီးဌာန အင်တာနက် စာမျက်နှာတွင် ဖော်ပြထားသည်။
အဆိုပါ အသင့်ဖျော် ကော်ဖီနှင့် လက်ဖက်ရည်များ နေရာတွင် ကိုယ်ခန္ဓာအတွက် လိုအပ်သော အာဟာရဓာတ်များ ရရှိနိုင်သည့် သန့်ရှင်းလတ်ဆတ်၍ ရောဂါကင်းသော နို့ကိုသောက်သုံး သင့်သည်ဟု ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး ဦးအုန်းမြင့်က သုံးသပ်သည်။
ပြည်တွင်းတွင် ထုတ်လုပ်ရောင်းချသော အသင့်ဖျော် ကော်ဖီမစ်အချို့ကို ပဲခွံမှုန့်၊ အုန်းခွံမှုန့်များ ပြုလုပ်ထားကြောင်း အဆိုပါ လုပ်ငန်းများနှင့် နီးစပ်သူများက ပြောဆိုလေ့ရှိသော်လည်း သက်ဆိုင်ရာ အစိုးရဌာနများ၊ စားသုံးသူ ကာကွယ်ရေး အဖွဲ့များက စစ်ဆေး၍ အထောက်အထား ထုတ်ပြန်ခြင်း မရှိသေးပေ။
“ရောဂါ ရ၊ မရဆိုတာနောက်ထား အဲဒီကော်ဖီမစ်တွေ သောက်ပြီးရင် သိသိသာသာ ရင်တွေတုန်လာတာတော့ အမှန်ပဲ” ဟု ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး ရွှေပြည်သာမြို့နယ် (၇) ရပ်ကွက်တွင် နေထိုင်သူ အမျိုးသမီးတစ်ဦးက ဆိုသည်။
ယင်းသို့ အသင့်ဖျော်ကော်ဖီနှင့် လက်ဖက်ရည်များသည် ကြာရှည်ထားနိုင်ရန်အတွက် အစားအစာများကို တာရှည်ခံနိုင်စေမည့် ဓာတ်ပစ္စည်းကို အသုံးပြုထားနိုင်ပြီး အသင့်ဖျော်ကော်ဖီနှင့် လက်ဖက်များကို တစ်ရက်လျှင် ငါးခွက်ခန့် နှစ်ရှည် သောက်သုံးပါက အစာအိမ်၊ အစာအိမ်နာရောဂါများ ဖြစ်ပွား၍ အူသိမ်တွင် အနာဖြစ်ကာ ခွဲစိတ်ရနိုင်ကြောင်း အထွေထွေရောဂါကု ဆရာဝန်တစ်ဦးက ပြောကြားသည်။
“ကော်ဖီမှာတော့ သကြားဓာတ်၊ ကဖင်းဓာတ်တွေပဲ ပါမယ်။ ဘာအာဟာရမှတော့ ရမှာမဟုတ်ဘူး၊ လက်ဖက်ရည်ကတော့ သူ့မှာပါတဲ့ ဓာတ်တစ်မျိုးကြောင့် သံဓာတ်စုပ်ယူနိုင်မှုကို တားတဲ့အတွက် သွေးအားနဲစေတယ်” ဟု ၎င်းကဆိုသည်။
နွားနို့တွင် ကိုယ်ခန္ဓာအတွက် လိုအပ်သော အာဟာရဓာတ်များ ပါဝင်ပြီး၊ အဓိက လိုအပ်သော ကယ်လ်စီယမ်သည် အရိုးပွရောဂါကို ကာကွယ်ပြီး၊ အချို့အစာအိမ် ရောဂါများအတွက် နို့သောက်သုံး သင့်သော်လည်း မွေးကင်းစ ကလေးငယ်များ၏ အူများသည် နို့နှင့် နို့ထွက်ပစ္စည်း သောက်သုံးမှုကို လက်မခံနိုင်သေး၍ အစာအိမ်နှင့် အူလမ်းကြောင်း ရောင်ယမ်းမှုများ ဖြစ်ပေါ်စေနိုင်သည်ဟု ၎င်းက ပြောသည်။
နေ့စဉ် နွားနို့ကို သောက်သုံးခြင်းဖြင့် လိုအပ်သော ကယ်လ်စီယမ်၊ ဗီတာမင်နှင့် အာဟာရဓာတ်များ ရရှိစေနိုင်သည့် အတွက် နွားနို့ပေါများစွာ သောက်သုံးနိုင်စေရန် နို့စားနွား မွေးမြူရေး လုပ်ငန်းများ တိုးချဲ့လုပ်ကိုင်၍ နွားနို့ထုတ်လုပ်မှု တိုးတက် မြင့်မားစေရေးအတွက် ဆောင်ရွက်သွားရန် လိုအပ်ကြောင်း ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး ဦးအုန်းမြင့်က ပြောကြားသည်။
နှစ်စဉ် စက်တင်ဘာလ နောက်ဆုံးပတ်၏ ဗုဒ္ဓဟူးနေ့သည် ကမ္ဘာ့ကျောင်းများ နို့တိုက်ကျွေးရေးနေ့ (World School Milk Day) ဖြစ်ရာ (၁၄) ကြိမ်မြောက် ကမ္ဘာ့ကျောင်းများ နို့တိုက်ကျွေးရေးနေ့ အထိမ်းအမှတ်အဖြစ် စက်တင်ဘာလ ၂၅ ရက်နေ့တွင် မွေးမြူရေး၊ ရေလုပ်ငန်းနှင့် ကျေးလက်ဒေသ ဖွံ့ဖြိုးရေးဝန်ကြီးဌာန၊ ပညာရေးဝန်ကြီးဌာန၊ ကျန်းမာရေးဝန်ကြီးဌာနနှင့် ကုမ္ပဏီအချို့ ပူးပေါင်း၍ နေပြည်တော်၊ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး၊ မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး၊ ချင်းပြည်နယ်၊ ကယားပြည်နယ်များရှိ မူလတန်းကျောင်းသူ ကျောင်းသား ၆၅,၀၀၀ ဦး ကို နို့တိုက်ကျွေးခဲ့ကြောင်း မွေးမြူရေး၊ ရေလုပ်ငန်းနှင့် ကျေးလက်ဒေသ ဖွံ့ဖြိုးရေးဝန်ကြီးဌာနက ထုတ်ပြန်ထားသည်။
ရခိုင်ပြည်နယ်အတွင်း ပုဒ်မ(၁၈)ဖြင့် ထောင်ချခံရမှု များပြားလာသဖြင့် ဒေသခံအဖွဲ့အစည်းများ ကန့်ကွက်
ရခိုင်ပြည်နယ်အတွင်း ပုဒ်မ(၁၈)ဖြင့် ထောင်ချခံရမှု ဆက်တိုက်ရှိနေခဲ့ရာ ဒေသခံ လူမှုအဖွဲ့အစည်းတစ်ချို့မှ ကန့်ကွက် ပြောဆိုမှုများ ရှိလာခဲ့ကြောင်း သိရသည်။
အဆိုပါပုဒ်မ ၁၈ ဖြင့် ထောင်ချ ခံထားရသူများသည် အနည်းဆုံး ထောင်ဒဏ် သုံးလ စီချမှတ်ခံခဲ့ရပြီး သံတွဲ၊ ကျောက်တော်၊ ရသေ့ တောင်၊ တောင်ကုတ်မြို့များမှ ငြိမ်းချမ်းစွာ ဆန္ဒဖော်ထုတ်ခြင်းတွင် ဦးဆောင်ပါဝင်သူများနှင့် တစ်ကိုယ်တော် ဆန္ဒပြသူများလည်း ပါဝင်ကြောင်း သိရသည်။
အလားတူစွာပင် ရသေ့တောင်မြို့မှ ပုဒ် မ ၁၈ ဖြင့် တရားစွဲဆိုခံထားရသူ နှစ်ဦးဖြစ်သော ကိုတိုးတိုးနှင့် ကိုသိန်းဌေးတို့ကိုလည်း စက်တင်ဘာ ၂၃ ရက်က ရသေ့တောင် မြို့နယ်တရားရုံးက ထောင်ဒဏ်သုံးလစီ ချမှတ်ခဲ့ကြောင်း သိရသည်။ ထိုသို့ ထောင်ဒဏ်ချမှတ်ခြင်းများနှင့် ပတ်သက်ပြီး ရသေ့တောင်မြို့မှ ဒေသခံတစ်ဦးက ''အခုထောင်ချတယ် ဆိုတာကလည်း သူတို့က ဦးဆောင်သူမဟုတ်ဘူး။ ဦးဆောင်တာက သံဃာတွေ ဦးဆောင်ပြီး စာတင်တယ်။ ဆန္ဒထုတ်ဖော်တယ်။ အဲဒါကို မဆီမဆိုင်နှစ်ဦးကို တရားစွဲပြီး ထောင်ချတာ ဖြစ်တဲ့အတွက် ဒေသခံတွေကလည်း ဒီအပေါ်မှာ အမြင်မရှင်းသလို၊ တရားစီရင်ရေးဟာ မျတမှုမရှိဘူးလို့ မြင်နေကြတယ်။ အဲဒါကို သံဃာထုကလည်း ကန့်ကွက်နေကြပါတယ်''ဟု ပြောကြားသည်။
ထို့အတူပင် သံတွဲမြို့တွင် တစ်ကိုယ်တော် ဆန္ဒထုတ်ဖော်ခဲ့သူ ကိုစိုးဝေအား သုံးကြိမ် ဆန္ဒထုတ်ဖော်ခဲ့မှုဖြင့် စက်တင်ဘာ ၉ ရက်က သံတွဲတရားရုံးမှ ထောင်ဒဏ် ၉ လ ချမှတ်ခဲ့ခြင်းအပေါ် ဒေသခံများက မကျေမနပ်ဖြစ်လျှက်ရှိရာ ဒေသခံတစ်ဦးဖြစ်သူ ဦးမြင့်မိုးက ''ဒီပုဒ်မ ၁၈ နဲ့ ထောင်ချတဲ့ ကိစ္စကို တစ်ယောက်မှ မကျေနပ်ကြဘူး။ ကျန်တဲ့တိုင်းနဲ့ ပြည်နယ်မှာကျတော့ ထောင်ဒဏ် သို့မဟုတ် ငွေဒဏ်ကျခံစေလို့ မပါဘဲ တိုက်ရိုက်ကြီး ထောင်ဒဏ်သုံးလ ကျခံစေဆိုတဲ့အချက်က အများကြီး ကွဲလွဲနေတာကို တွေ့ရပါတယ်။ ဒါကြောင့် ပြည်သူတစ်ရပ်လုံး မကျေမနပ် ဖြစ်နေကြပါတယ်''ဟု ဆိုသည်။
ယင်းအပြင် စက်တင်ဘာ ၁၃ ရက်ကလည်း တောင်ကုတ်တရားရုံးမှ ကိုစိုးဝင်း၊ ကိုမင်းထွန်း(ခ)သုံးလုံးနှင့် ကိုသန်းလွင်စိုးတို့အား ပုဒ်မ ၁၈ ဖြင့် ထောင်ဒဏ် သုံးလစီ ချမှတ်ခဲ့ကြောင်း သိရသည်။ ထိုကိစ္စနှင့် ပတ်သက်ပြီး တောင်ကုတ်မြို့ ရခိုင်လူမှုကွန်ယက်မှ ကန့်ကွက်သော ကြေညာချက်များ ထုတ်ပြန်ခဲ့ကြောင်း သိရသည်။ ယင်းနှင့်ပတ်သက်ပြီး တောင်ကုတ် ရခိုင်လူမှုကွန်ယက်မှ ကိုဇေယျကျော်က ''တောင်ကုတ်က ကိုစိုးဝင်းတို့သုံးဦး ကို ပုဒ်မ ၁၈ နဲ့ထောင်ဒဏ် ချမှတ်တာဟာ လုံးဝမတရားဘူးလို့ ယူဆတယ်။ ဒါကြောင့် ကျွန်တော်တို့က ကန့်ကွက်သလို တောင်ကုတ် မြို့သူမြို့သားတွေကလည်း မကျေနပ်ကြဘူး'' ဟု ပြောကြားခဲ့သည်။
ကင်တားနားအား မြန်မာ့လူ့အခွင့်အရေး ကိုယ်စားလှယ် တာဝန်မှ ရပ်နား
ရန်ကုန် ၊ စက်တင်ဘာ ၂၅။ ။ ကု လသမဂ္ဂ၏ မြန်မာနိုင်ငံ လူ့အခွင့် အရေးဆိုင် ရာ အစီရင်ခံစာတင် သွင်းသူ ကင်တားနားအား ရာ ထူးသက်တမ်းကို ထပ်မံတိုးပေး တော့မည်မဟုတ်ဘဲ ရပ်ဆိုင်းတော့ မည်ဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။
စက်တင်ဘာ ၂၄ရက်ကပြု လုပ်ခဲ့သော ကုလသမဂ္ဂလူ့အ ခွင့်အရေးဆိုင်ရာ အစည်းအဝေး တစ်ခုတွင် ယင်းသို့ဆုံးဖြတ်ခဲ့ ကြောင်း သိရသည်။
''သူ့ကို ကုလသမဂ္ဂရဲ့ မြန် မာနိုင်ငံလူ့အခွင့်အရေးဆိုင်ရာ အစီရင်ခံစာတင်သွင်းသူအဖြစ် တာဝန်သက်တမ်းကို ထပ်မံတိုး မပေးတော့တာလို့ သိရပါတယ်။
သူ့နေရာမှာ အသစ်တစ်ဦး ခန့်ထားရမှာဖြစ် ပါတယ်''ဟု နိုင်ငံ တော်သမ္မတ ရုံးမှ တာဝန်ရှိသူတစ်ဦးက အ တည်ပြုပြောကြားခဲ့သည်။ အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအင် အားစုပါတီဥက္ကဋ္ဌ ဦးခင်မောင် ဆွေက ''အရင် စစ်အစိုးရလက် ထက်ကတည်းက သူလာခဲ့တယ်။ အကျဉ်းထောင်တွေ ထဲဝင်ကြည့် တယ်။ တွေ့တယ်၊ ဆုံတယ်၊ ပြန် သွားတယ် စတာတွေလုပ်ခဲ့တယ်။ ဒါပေမဲ့ သူလုပ်ကိုင်တာတွေနဲ့ ပတ်သက်လို့ စစ်အစိုးရက အရေး တယူလုပ်ခဲ့တာ မရှိဘူး။ ကင်တား နားကြောင့်လဲ ကျွန်တော်တို့ ထောင်ထဲက လွတ်ခဲ့တာမဟုတ် ပါဘူး။ အခုချိန်ကျတော့ လူ့အဖွဲ့ အစည်းဟာ ပွင့်လင်းလာပြီဆို တဲ့အချိန်မှာ ကင်တားနားအနေ နဲ့တော့ မြန်မာနိုင်ငံ နောက်ဆုံး ခရီးစဉ်မှာ ဘုန်းတော်ကြီးတွေကို မရိုမသေလုပ်တယ်၊ ဘက်လိုက် မှုတွေရှိတယ်ဆိုပြီးတော့ သူ့ကို ပြောဆိုကြတာတွေရှိတော့ ကုလ သမဂ္ဂအနေနဲ့ စဉ်းစားမယ်ထင် တယ်။ နောက် သူ့ရဲ့သက်တမ်း ကုန်တာလဲ ဖြစ်နိုင်ပါတယ်''ဟု ပြောသည်။
ကင်တားနားသည် မြန်မာ နိုင်ငံ၏နောက်ဆုံးဆယ်ရက်ကြာ ခရီးစဉ်အတွင်း ဩဂုတ်လအ တွင်းက မိတ္ထီလာမြို့သို့ရောက်ရှိ စဉ် ဒေသခံများက သူ၏လမ်း ကြောင်းအား ပိတ်ဆို့ကာ ယင်း လိုက်ပါစီးနင်းလာသောကားအား ဝိုင်းဝန်းထုနှက်ခဲ့ကြကြောင်း ဩ ဂုတ်၂၁ရက်တွင် ရန်ကုန်လေဆိပ် ၌ပြုလုပ်သော သတင်းစာရှင်းလင်း ပွဲတွင်ပြောကြားခဲ့ပြီး ယင်းပြော ကြားချက်အား ပြန်ကြားရေးဝန် ကြီးဌာနဒုတိယဝန်ကြီးဦးရဲထွဋ် က ယင်း၏ပြောကြားချက်သည် မှန်ကန်မှုမရှိကြောင်းနှင့် ပြည် သူများက ယင်းအား အေးချမ်း စွာဆန္ဒပြရန်ရောက်ရှိနေခြင်း သာဖြစ်ကြောင်း၊ ယင်းလိုက်ပါစီး နင်းလာသောကားအား ပြည်သူ များက ဝိုင်းဝန်းကန်ကျောက်သည် ဆိုသည်မှာမဟုတ်မှန်ကြောင်း ပြန် လည်ရှင်းလင်းခဲ့သည်။
နမူနာပေးပို့ သော ရေကျိုငါးပိအချို့ ယူရီးယားပါဝင်ကြောင်း FDA အတည်ပြုပြီ
မြန်မာနိုင်ငံ စားသုံးသူကာကွယ်ရေးအသင်းမှ ပေးပို့ထားသော
ရေကျိုငါးပိများအား ဓာတ်ခွဲစစ်ဆေးရာ ယူရီးယား (Urea) ဓာတ် ပါဝင်မှုကို တွေ့ရှိရကြောင်း ကျန်းမာရေးဝန်ကြီးဌာန အစားအသောက်နှင့် ဆေးဝါးကွပ်ကဲရေး ဦးစီးဌာန(FDA)က မဇ္ဈိမသို့ စက်တင်ဘာ ၂၄ ရက်က ဖြေကြားသည်။
သို့သော် ထိုသို့ယူရီးယားပါဝင်ခြင်းမှာ ဓာတ်မြေသြဇာ ရောနှောခြင်းကြောင့် ဟုတ်သည်၊ မဟုတ်သည်ကို ခွဲခြားနိုင်ခြင်း မရှိပါကြောင်းလည်း
ဆောင်ရွက်ရန်ရှိသည်ဆိုသည့် အချက်ကိုမူ ဆက်လက် ဖြေကြား
ရေကျိုငါးပိတွင် ဓာတ်မြေသြဇာပါဝင်မှု ရှိ၊ မရှိ စစ်ဆေးရန်
မြန်မာနိုင်ငံစားသုံးသူကာကွယ်ရေးအသင်းက ရန်ကုန် FDA နမူနာသုံးခုကို ပေးပို့လာခဲ့ပြီး ရန်ကုန် FDA က နေပြည်တော်သို့ ဆက်လက်ပေးပို့စစ်ဆေးပေးခြင်း ဖြစ်သည်။ ယင်းနမူနာ သုံးခုအနက် နမူနာ အမှတ်(၂)တွင် ယူရီးယားပါဝင်မှုကို တွေ့ရှိရကြောင်း ပြောသည်။
ငါးပိတွင် ဓာတ်မြေသြဇာ ပါဝင်ခြင်း ရှိ၊ မရှိကို အစားအသောက်နည်းပညာရပ်ဆိုင်ရာလုပ်ငန်းဆပ်ကော်မတီမှ ပညာရှင်များသို့ ဓာတ်ခွဲစစ်ဆေးသည့်နည်းလမ်းများကို တင်ပြဆွေးနွေးခဲ့ကြောင်း FDA ၏ ဖြေကြားချက်တွင် ပါဝင်သည်။
မြန်မာနိုင်ငံစားသုံးသူကာကွယ်ရေးအသင်း ဥက္ကဌ ဦးဗအုပ်ခိုင်က “စစ်ရင်တော့ ယူရီးယားကို တွေ့မှာပဲလို့ ဝေဖန်နေကြတာရှိတယ်။
ရေကျိုငါးပိထဲမှာ အလိုလို ယူရီး ယားကဖြစ်တာပဲဆိုပြီး ပြောနေတာရှိတယ်” ဟု ပြောသည်။
သို့သော် ရေကျိုငါးပိတွင် တွေ့နိုင်သည်က သဘာဝအလျောက်ဖြစ်သော
အောဂဲနစ်ဖြစ်ကြောင်း၊ ငါးပိထဲမှာ ယူရီးယား မပါဘူး မပြောဘူး၊ သို့သော် မည်သည့် ရာခိုင်နှုန်းအထက်ပါလျှင် ထပ်ထည့်ထား၊ မထားကို သိနိုင်ကြောင်း၊ ထပ်တည့်သော ဓာတ်မြေသြဇာက
ဦးဘအုပ်ခိုင်က “ငါးပိထဲမှာ နိုက်ထရိုဂျင် ဘယ်လောက်များများ ပါနေတယ်ဆိုတာ တိုင်းလို့ရရင် အဖြေထွက်တာပါပဲ။
နိုက်ထရိုဂျင်၊ ဖော့စထရပ်၊ ပိုတက်ဆီယမ်တို့ကို တိုင်းရင် အဖြေထွက်တာပဲ”ဟု ပြောသည်။
ရေကျိုငါးပိများကို စစ်ဆေးရန် မြန်မာနိုင်ငံစားသုံးသူ ကာကွယ်ရေးအသင်းက ပေးပို့ခြင်းဖြစ်ပြီး မည်သည့်နေရာမှ ယူလာသည်ဟု ပြောဆိုခြင်းမရှိ၍ မည်သည့်နေရာမှ ရေကျိုငါးပိက ယူရီးယားပါဝင်သည်ဟု ပြော၍မရကြောင်း ရန်ကုန် FDA မှ တာဝန်ရှိသူ တစ်ဦးက ဆိုသည်။
ဖျာပုံ၊ ညောင်တုန်း၊ မအူပင်၊ ငါးသိုင်ချောင်း၊ ဘော်လယ်၊
မော်လမြိုင်ကျွန်းဒေသများရှိ ငါးပိတွင် ဓာတ်မြေသြဇာ ပါဝင်ခြင်းကို
တွေ့ရှိခဲ့ကြောင်း သတင်းရရှိခဲ့ပြီး တစ်နှစ်ဝန်းကျင်ခန့် အချိန်ယူ စစ်ဆေးခဲ့ကြောင်း စားသုံးသူ ကာကွယ်ရေး အသင်းက ဆိုသည်။
ရန်ကုန်ငါးပိဒိုင်များသို့ အဓိကထားတင်ပို့သည့် ဧရာဝတီတိုင်းရှိ ဒေသအချို့မှ ဒေသခံများက ငါးပိတွင် ဓာတ်မြေသြဇာ
ရောခြင်းကို မြန်မာနိုင်ငံစားသုံးသူကာကွယ်ရေးအသင်းသို့ သတင်းပေးပို့ခဲ့ခြင်းဖြစ်ပြီး ယင်းမှတစ်ဆင့် FDA သို့ စစ်ဆေးနိုင်ရန် သြဂုတ် ၂၈ ရက်တွင် ပေးပို့ခဲ့ခြင်းဖြစ်ကြောင်း မြန်မာနိုင်ငံစားသုံးသူကာကွယ်ရေးအသင်းမှ သိရသည်။
ရေကျိုငါးပိတွင် ဓာတ်မြေသြဇာပါဝင်သောသတင်းများ ထွက်ပေါ်လာပြီးနောက်တွင် ငါးပိရောင်းအားများ ထက်ဝက်
ကျော်ကျဆင်းခဲ့ရကြောင်း ငါးပိကုန်သည်များက ဆိုထားသည်။
ယခင်က ငါးပိ ငါးပိဿာရောင်းရချိန်တွင် သတင်းများပေါ်ထွက်ပြီးနောက် တစ်ပိဿာခန့်သာ ရောင်းရတော့ကြောင်း ငါးပိ၊ ငါးခြောက်၊ ငံပြာရည်အသင်းဖြစ်မြောက်ရေးကော်မတီနာယက ဦးမောင်မောင်သိန်းက ဆိုသည်။
ရေကျိုငါးပိပြုလုပ်ရာတွင် အချိန်တစ်နှစ်ကျော် နှစ်နှစ်ခန့်ယူရမည့်အစား ခုနစ်ရက်မှ ၁၀ ရက်ခန့်သာ ထားပြီး ဈေးကွက်အတွင်း
ဖြန့်ချိရောင်းချနိုင်စေရန်အတွက် ငါးအရိုးများကို နူးလွယ်စေရန် ယူရီးယားမြေသြဇာများကို ရေချိုငါးပိပြုလုပ်ရာတွင် ပြုလုပ်သူများက ထည့်နေခြင်း ဖြစ်သည်ဟု သိရသည်။
အမှန်တကယ်ဆောင်ရွက်ပါက စားသုံးသူများ၏ ကျန်းမာရေးကို ထိခိုက်ခြင်းဖြစ်နိုင်ရာ စီးပွားရေးကျင့်ဝတ်ကို လိုက်နာရန် လိုအပ်ကြောင်း စီးပွားရေးပညာရှင်များက ဆိုသည်။ မိမိအမြတ်ရရှိရေးတစ်ခုတည်းအတွက် တစ်နိုင်ငံလုံးရှိ စားသုံးသူများ ဒုက္ခရောက်အောင် မလုပ်သင့်ကြောင်း
အမျိုးသား အစားအသောက် အက်ဥပဒေအရ ပြည်သူလူထုစားသုံးသော အစားအသောက်တွင် အဆိပ်ဖြစ်စေခြင်း၊
ဘေးဥပါဒ်ဖြစ်စေခြင်းများ ဖြစ်ပါက ထောင်ဒဏ်သုံးနှစ်ဖြစ်စေ၊ ငွေဒဏ် ကျပ် ၃၀,၀၀၀ဖြစ်စေ၊ ဒဏ်နှစ်ရပ်လုံးကို ချမှတ်နိုင်သည်။
ယူရီးယားပါဝင်သော အစားအသောက်ကို အချိန်ကြာရှည်စားသုံးမိပါက ဦးနှောက်ပိုင်းဆိုင်ရာရောဂါများနှင့် ကျောက်ကပ်ပိုင်းဆိုင်ရာရောဂါများ ဖြစ်ပွားနိုင်သည့်အပြင် သွေးထဲတွင် ယူရီးယားပါဝင်မှု မြင့်မားလာပါက ချက်ချင်း သတိမေ့သွားသည်အထိ ဖြစ်နိုင်သည်။
တောင်ဒဂုံမြို့နယ်ရှိ ကျပန်းအလုပ်လုပ်သူ ကလေး လေးယောက်မိခင်
ဒေါ်ချိုချိုက “လူတွေကလည်း လုပ်ရက် လိုက်ကြတာ။ ဆင်းရဲသားတွေက ဒါလေးပဲစားရတာ” ဟု မှတ်ချက်ပြုလိုက်သည်။
စားသောက်ကုန်များနှင့်ပတ်သက်၍ အန်္တရာယ်ရှိသော ဆိုးဆေးများ ပါဝင်သဖြင့် ငါးပိအမျိုးမျိုးကို စားသုံးရန်မသင့်ဟု ကျန်းမာရေးဝန်ကြီးဌာနက တရားဝင်ကြေညာချက်ထုတ်ပြန်ထားမှုများ ၂၀၀၉ ခုနှစ်က ပြုလုပ်ခဲ့ရသည်။
ငါးပိမတိုင်မီ အချဉ်ရည်တွင် ဆာလဖြူရစ်အက်စစ်တွေ့ရှိခြင်း၊ ငရုတ်သီးမှုန့်များတွင် ဆိုးဆေးအသုံးပြုခြင်း၊ လက်ဖက်တွင် ဆိုးဆေးအသုံးပြုခြင်းများကိုလည်း တွေ့ရှိ ထားခဲ့သည်။
ထို့အပြင် နို့မှုန့်များတွင် မယ်လမင်းဓာတ်များပါဝင်ကြောင်း တွေ့ရ၍ တရုတ်နိုင်ငံတွင် ပြန်လည်သိမ်းဆည်းခြင်းက လည်း စားသုံးသူများကို စိုးရိမ်ပူပန်မှုများ ဖြစ်ပေါ်စေခဲ့သည်။
ဘေးကင်းလုံခြုံစိတ်ချရသည့် စားသောက်နေထိုင်မှု ဘ၀ကို တမ်းတလျက်နှင့်ပင် ဝေးနေရသည်။
High Blood Pressure Aftermath သွေးတိုးကျဆေး သတိပေးပါရစေ
သွေးတိုးရောဂါရှိလို့ သောက်ရတဲ့ သွေးကျဆေးတွေမှာလဲ ရှိတာဘဲ။ ဒါပေမဲ့ ဆိုးကျိုး ကြောက်လို့ ဆေးမသောက်ဘဲ မနေပါနဲ့။ သွေးတိုးကျဆေး သတိပေးပါရစေ။ မသောက်ပါနဲ့လို့ မဟုတ်ပါ။ ဆက်သောက်ပါ။ လိုအပ်ရင် ဆရာဝန်ကို တိုင်ပင်ပါ။
“လူကြီး ၃ ယောက်မှာ ၁ ယောက် သွေးတိုးရှိတယ်။ ဒါပေမဲ့ ၆၁% ဟာ ဆေးကုသမှု လုံလောက်အောင်မယူကြဘူး။ ၃ ပုံ ၂ ပုံလောက်က သွေးတိုးကို ထိန်းထာတဲ့အထိ မလုပ်ကြဘူး” လို့ American Heart Association အမေရိကန် နှလုံးရောဂါ အသင်းက ထောက်ပြထားပါတယ်။ ဒီလိုဖြစ်နေရတဲ့ အကြောင်းတရားတွေထဲမှာ သွေးကျဆေးရဲ့ ဘေးထွက်-ဆိုးကျိုးကို ကြောက်လို့ ဆေးကို ဆရာဝန် ညွှန်တဲ့အတိုင်းမသောက်ကြတာလဲပါတယ်။
“သွေးတိုးကျစေတဲ့ဆေးပေါင်း ၂ဝဝ ရှိတယ်။ ဒီလိုအများကြီးထဲကနေ လူနာအတွက်အသင့်ဆုံးဆိုတာ ရွေးပေးရပါတယ်။” လို့ အမေရိကန် ဆေးပညာပါမောက္ခ ဒေါက်တာ သောမတ်စ်-ဂေးလ်စ် ကပြောပါတယ်။
1. Fatigue and Dizziness အားယုတ်ပြီး ခေါင်းမူးဝေဝေနေခြင်း
သွေးတိုးတက်နေချိန်မှာ သွေးကျဆေးသောက်လိုက်တော့ တချို့နေရာတွေမျာ သွေးစီးလျှောက်မှု နည်းလာတာ ခံရတဲ့အထဲမှာ ဦးနှောက်လဲပါတယ်။ ဒါကြောင့်မူးဝေဝေုဖစ်တယ်။ မဆိုးလှပါ။ မစိုးရိမ်ပါနဲ့။
2. Cough ချောင်းဆိုးခြင်း
သွေးကျဆေးတွေထဲက ACE inhibitors အမျိုးအစားဟာ ဆေးသောက်နေသူ ၁ဝ-၁၅% ချောင်းဆိုးကြတယ်။ ဒီဆေးနဲ့သာ အဆင်ပြေနေရင် ဆေးသောက်တာရပ်မပြစ်ပနဲ့။ လိုလာရင် ဆရာဝန်က ဆေးပြောင်းပေးပါမယ်။ Accupril, Altace, Capoten, Lotensin, Monopril, Prinivil, Vasotec, and Zestril ဆိုတဲ့နာမည်တွေနဲ့လာတယ်။
3. Frequent Urinationဆီးခဏခဏသွားခြင်း
Diuretics ဆီးသွားအောင်လုပ်တဲ့ဆေးကိုသောက်ရရင် မနက်စောစေအချိန်မှာသောက်သင့်တယ်။ Hydrochlorothiazide (Hyzaar or Maxide) ဆေးတွေဖြစ်တယ်။ ထိရောက်ပါတယ်။
4. Fluid Retention ကိုယ်ရောင်ခြင်း
သွေးကျဆေးတွေထဲက ဆီးသွားစေတဲ့အမျိုးမဟုတ်ရင် အနည်းနဲ့အများ အနည်းအပါး ကိုယ်ရောင်စေနိုင်တယ်။ ခြေမျက်စိ၊ ခြေသလုံးမှာရောင်တယ်။ အထူးသဖြင့် Calcium channel blockers အုပ်စုသွေးကျဆေးတွေထဲက Amlodipine (Norvasc) နဲ့ Nifedipine (Procardia) တွေကရောင်စေတယ်။
5. Sexual Dysfunction လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြောင်းအလဲ
တချို့ယောက်ျားတွေမှာ Erectile dysfunction (ED) ပန်းညှိုးတာဖြစ်စေနိုင်တယ်။ တချို့ကိုဆေးပြောင်းပေမယ်။ လိုအပ်ရင် Viagra ဆေးပါ ညွှန်ပေးရင် အားလုံးအဆင်ပြေစေမယ်။
6. Heart Arrhythmia နှလုံးခုန်မမှန်ခြင်း
Diuretics ဆီးသွားစေတဲ့ဆေးကြောင့် Potassium (ပိုတက်ဆီယအ်) နည်းစေရာကနေပြီး နှလုံးခုန်မမှန်တာ ဖြစ်စေနိုင်တယ်။ ACE inhibitors နဲ့ Angiotensin receptor blockers ဆေးတွေကတော့ အဲလို မဖြစ်စေဘူး။
7. Allergic Reactions (အလာဂျီ) ရခြင်း
လူတိုင်းဟာ မတည့်တာရှိတတ်တယ်။ အစားအသောက်မတည့်သလို ဆေးကိုလဲမတည့်ကြဘူး။ တယောက်နဲ့ တယောက်တော့ မတူကြပါ။ မတည့်တာကိုတော့ ရှောင်ရတယ်။
1. Don't Quit Medication Abruptly သွေးကျဆေးကိုရုတ်တရက်ဖြတ်မပြစ်ပါနဲ့။
2. Treatment Adherence ဆေးကိုစွဲစွဲမြဲမြဲသောက်ပါ။
3. High blood pressure သွေးတိုးရောဂါဆိုတာ နာတာရှည်ဖြစ်တယ်။
4. ဆေးကုသမှု စနစ်တကျမရှိရင် Stroke ဦးနှေညက်သွေးကြောပျက်စီးတာ၊ Heart attack နှလုံး (အတက်) ရတာ၊ Heart failure နှလုံးကနိုင်အောင် အလုပ်မလုပ်နိုင်တော့တာ နဲ့ Kidney failure ကျောက်ကပ်ပျက်စီးတာတွေ ဆက်ဖြစ်လာနိုင်တယ်။ သွေးတိုးကို Silent killer တိတ်တိတ်လေး အသက်သေစေအောင်လုပ်တာလို့ ခေါ်ကြတယ်။ ခြောက်ပြောတာ မဟုတ်ပါ။
5. သွေးတိုးနှင့် တခြားဆေးတွေ -
• NSAIDs and High Blood Pressure အကိုက်အခဲပျောက်ဆေး Aspirin, Ibuprofen နဲ့ Naproxen တွေက သွေးတိုးတက်စေနိုင်တယ်။
• Cough and Cold Medications အအေးမိသက်သာဆေးတွေမှာလဲ NSAIDs တွေပါနေလို့ သွေးတိုးတက်စေနိုင်တယ်။
• Decongestants အအေးမိသက်သာဆေးထဲမှာပါတဲ့ ဒီဆေးမျိုးကနေလဲ သွေးတိုးတက်စေနိုင်တယ်။
• Migraine Headache Drugs (မိုင်ဂရင်း) ဆေးတွေကလဲ သွေးကြောကို ကျဉ်းစေတာမို့ သွေးဖိအားတက်စေနိုင်တယ်။
• Weight Loss Drugs ပိန်ဆေးတချို့ကနေလဲ သွေးတိုးများစေနိုင်တယ်။ Appetite suppressants စားချင်စိတ် နည်းစေတဲ့ ဆေးအမျိုးအစားတွေကို ပြောတာဖြစ်တယ်။
ချမ်းသာသည်ကို ကြွားလုံးထုတ်ပြီး လူအများကို “လယ်သမား” ဟု ခေါ်သူ
သင့်အနေနဲ့ ပိုက်ဆံအများကြီး ရှိတယ်လို့ ခန့်မှန်းကြည့်ပါ။ သုံးမကုန်အောင် များတာမှ ဒေါ်လာ ၄ ထောင်ကို မိုးပျံပူပေါင်းနဲ့ ထည့်လွှတ်တာတို့ iPhone5ကို ဒါဇင်လိုက်ဝယ်တာတို့ကို အပျော်သဘောနဲ့ လုပ်နေရလောက်အောင်ကို များနေတယ် ဆိုပါတော့။
စိတ်ကူးထဲမှာတင် မဟုတ်ပါဘူး။ အပြင်မှာ တကယ်ဖြစ်နေတဲ့ ကိစ္စတစ်ခုပါ။ အင်တာနက်နဲ့ လူမှုရေး ကွန်ယက်တွေပေါ်မှာ လွန်စွာမှ ကျော်ကြားနေတဲ့ လူတစ်ယောက် အကြောင်းပါ။
သူကတော့ ဆော်ဒီမင်းသားလည်း မဟုတ်သလို၊ ကမ္ဘာကျော် သူဌေးကြီးလဲ မဟုတ်ပါဘူး။ သူကတော့ အသက် ၁၇ နှစ်သာ ရှိသေးတဲ့၊ မိမိကိုယ်ကို Lavish (အဆင့်မြင့်ဘဝ) လို့ ခေါ်တွင်နေတဲ့ အမေရိကန်နိုင်ငံ၊ ဆန်ဖရန်စစ္စကိုမြို့က သူဌေးသားလို့ ယူဆရတဲ့ လူငယ်တစ်ဦးပါပဲ။
ဒီကောင်လေးဟာ နေ့စဉ်နေ့တိုင်း သူဘယ်လောက် ချမ်းသာလဲဆိုတာကို ဓာတ်ပုံရိုက်ပြီး အွန်လိုင်းပေါ်မှာ ကြွားလုံးထုတ်နေပါတယ်။ သူ့ရဲ့ Instagram နဲ့ YouTube စတဲ့ လူမှုကွန်ယက်တွေပေါ်မှာ ဒေါ်လာ ၁၀၀ တန် အထုပ်လိုက်ကိုင်ပြတဲ့ပုံတွေ ၊ ဇိမ်ခံကား အကောင်းစားတွေ ၊ အိမ်ကြီးအိမ်ကောင်းတွေနဲ့ ရိုက်ထားတဲ့ပုံတွေ ၊ ဝတ်ကောင်းစားလှတွေ ဝတ်ထားတဲ့ပုံတွေ ၊ စိန်ရွှေရတနာတွေ ကိုင်ထားတဲ့ ပုံတွေကို ဖောဖောသီသီကို ဖော်ပြထားပါတယ်။
သူ့ရဲ့ ဆိုရိုးစကားကတော့ “ငါ့ဘဝက Louis Vuitton လိုပါပဲ။ လူတွေအားလုံးက လိုချင်နေတယ်။ ကိုယ့်အိပ်ရာကိုယ် ခင်းရတာကတော့ မင်းတို့ လယ်သမားမျိုးတွေပါပဲ။” ဖြစ်ပါတယ်။ ဈေးကြီးတဲ့ ရေသန့်နဲ့တာ လက်ဆေးပြီး ၊ LV ပစ္စည်းတွေပဲ သုံးပါတယ်တဲ့။ စိတ်ကူးပေါက်ရင် လူတွေကို ဒေါ်လာသောင်းချီပြီး ပေးလေ့ရှိပါတယ်တဲ့။
Lavish ကို ကြည့်မရသူများကတော့ သူ့ရဲ့ ဘဝမှန်ကို ဖော်ထုတ်ဖို့ ကြိုးစားနေပါတယ်။ အချို့ကတော့ Lavish ဟာ အာရပ်နွယ်ဖွား သူဌေးတစ်ဦးရဲ့ သားဟုဆိုပြီး အချို့သတင်းများကမူ ဆန်ဖရန်စစ္စကိုမြို့ရှိ ဘဏ်သူဌေးတစ်ဦးရဲ့ သားလို့ ဆိုပြန်ပါတယ်။
ယခုနောက်ပိုင်းမှာတော့ Lavish အကြောင်း ဖော်ထုတ်လာသူတွေ များလာပြီး ယင်းဖော်ပြထားသည့် ဓာတ်ပုံအချို့ဟာ ပြုပြင်ထားခြင်း (သို့) အခြားသူတစ်ဦးစီမှ ရယူထားခြင်းများ ရှိနေကြောင်း တွေ့ရှိလာရပါတယ်လို့ ဆိုပါတယ်။
Lavish ရဲ့ ဇာတ်လမ်းဟာ အမှန်တကယ်ပဲ အထိမ်းအကွပ်မဲ့နေတဲ့ သူဌေးသားရဲ့ အကြောင်းလား သို့တည်းမဟုတ် အသေအချာ စီစဉ်ပြီး ဆောင်ရွက်နေတဲ့ လူမှုကွန်ယက် စမ်းသပ်မှုတစ်ခုလား ဆိုတာကိုတော့ သင့်အနေနဲ့လည်း ချင့်ချိန်ပြီးသာ ဆုံးဖြတ်ပါတော့။
ဘောလုံးအဖွဲ့ချုပ်နှင့် တိုယိုတာကားကုမ္ပဏီတို့ စပွန်ဆာကိစ္စဆွေးနွေး
ရန်ကုန်၊ စက်တင်ဘာ ၂၅- မြန်မာ နိုင်ငံဘောလုံးအဖွဲ့ချုပ်သည် လာ မည့်နှစ်တွင် ကျင်းပမည့် ဘော လုံးပြိုင်ပွဲများစပွန်ဆာပေးနိုင်ရေး အတွက် တိုယိုတာကားကုမ္ပဏီ နှင့် ဆွေးနွေးမှုများပြုလုပ်လျက် ရှိကြောင်း သိရသည်။
မြန်မာနိုင်ငံဘောလုံးအဖွဲ့ ချုပ်မှ လက်ရှိကျင်းပလျက်သော ဘောလုံးပြိုင်ပွဲများအနက် မြန် မာနေရှင်နယ်လိဂ်ပြိုင်ပွဲအား ''မြန် မာ''မှ လည်းကောင်း၊ မြန်မာနေ ရှင်နယ်လိဂ်(၂)ပြိုင်ပွဲအား ''နယူး ဟော်လန်''ဓာတ်မြေဩဇာမှ လည်းကောင်း အသီးသီးစပွန်ဆာ ပေးထားသည်။ သို့သော်လက်ရှိ ကျင်းပလျက်ရှိသော MNLC က စပြိုင်ပွဲမှာမူ စပွန်ဆာရရှိခြင်း မရှိကြောင်း သိရသည်။
မြန်မာနိုင်ငံဘောလုံးအဖွဲ့ ချုပ်မားကက်တင်း ဒါရိုက်တာဦး ဆူးအောင်က ''ကျွန်တော်တို့အ နေနဲ့ ဂျပန်ကားကုမ္ပဏီတစ်ခုဖြစ် တဲ့ တိုယိုတာကားကုမ္ပဏီနဲ့ စပွန် ဆာစာချုပ်ကိစ္စချိတ်ဆက်နေပါ တယ်။ ကျွန်တော်စပြီး သူတို့နဲ့ချိတ် ဆက်နေခဲ့တာ ၂၀၁၃ နှစ်စက တည်းပါ။ ဂျပန်ကုမ္ပဏီတွေက အ လုပ်လုပ်တဲ့နေရာမှာ စေ့စပ်တော့ သူတို့အနေနဲ့ သေချာစဉ်းစားနေ ပုံရပါတယ်။ အခုဆိုရင်တော့ ရာ ခိုင်နှုန်းတော်တော်များများတော့ အောင်မြင်နေပါပြီ။ သူတို့နဲ့စ ကားပြောနေတာကတော့ လာမယ့် နှစ်မှာကျင်းပမယ့် ပြိုင်ပွဲတွေအ တွက်ပါ။ ကျွန်တော်သူတို့ဆီကို စာတင်ထားကတော့ ပြိုင်ပွဲအစုံ ပါပဲ။ ဘယ်ပြိုင်ပွဲမှာ စပွန်ဆာပေး မယ်ဆိုတာ၊ စပွန်ဆာကြေးဘယ် လောက်ဆိုတာကတော့ လက်ရှိ အချိန်မှာ သေချာမပြောနိုင်သေး ပါဘူး။ စာချုပ်မှာလက်မှတ်ထိုး ပြီးရင်တော့ သတင်းထုတ်ပြန်ပေး သွားမှာပါ''ဟု ပြောသည်။
မြန်မာနိုင်ငံဘောလုံးအဖွဲ့ ချုပ်သည် လာမည့်နှစ်တွင် လက် ရှိကျင်းပနေသည့် ပြိုင်ပွဲများအ ပြင် အမျိုးသမီးလိဂ်ပြိုင်ပွဲနှင့် မြန် မာနေရှင်နယ်လိဂ်(၂)လူငယ်ပြိုင် ပွဲတို့အား ကျင်းပသွားရန်စီစဉ် ထားကြောင်းသိရသည်။
တိရစ္ဆာန်ရုံအတွင်း တိရစ္ဆာန်ပုံပါအဝတ်များ မဝတ်ရ
ဗြိတိသျှတိရစ္ဆာန်ရုံတစ်ခု ဖြစ်သည့် Chessington World of Adventures မှ စီစဉ်သော Zufari Ride Into Africa အစီ အစဉ်တွင် တိရစ္ဆာန်များအား ထရပ်ကားများဖြင့် လိုက်လံကြည့် ရှုသော ဧည့်သည်များအနေဖြင့် ကျားသစ်၊ မြင်းကျား စသည်တို့ ၏ ကိုယ်ခန္ဓာနှင့်ဆင်တူသော အကြောင်အကျားအင်္ကျီများမဝတ် ဆင်ရန် ပိတ်ပင်လိုက်ကြောင်းသိရ သည်။
ဆာဖာရီကဲ့သို့ နယ်မြေ အတွင်း ကားစီး၍လာရောက်သူ များနှင့် သစ်ကုလားအုတ်၊ ကြံ့ စသည့် တိရစ္ဆာန်များနှင့်တွေ့ကြ သောအခါ လာရောက်ကြည့်ရှု သူများ၏ အင်္ကျီအဆင်ရှုပ်ရှုပ် ထွေးထွေးကို မနှစ်သက်သည့် လက္ခဏာပြကာ မျက်စိနောက်ပြီး ထွက်ပြေးသွားတတ်ကြောင်း၊ ထို ကဲ့သို့အင်္ကျီများဝတ်ဆင်လာသော ဧည့်သည်များအနေဖြင့် ထိုအင်္ကျီ များအား အပေါ်မှ ထပ်ဖုံးရန် အဝတ်များ ငှားရမ်းနိုင်ကြောင်း သိရသည်။
အဝေးသင် တက္ကသိုလ် စာမေးပွဲအောင်မှတ်များ ထပ်မံတင်းကျပ်မည်
ရန်ကုန်နှင့် မန္တလေး အဝေးသင် တက္ကသိုလ်တို့က ယခုနှစ် အောက်တိုဘာလဆန်းတွင် စတင်ကျင်းပမည့် စာမေးပွဲ အောင်မှတ်များကို ယခင်နှစ်များထက် ပိုမိုတင်းကျပ်ထားကြောင်း ရန်ကုန်အဝေးသင် တက္ကသိုလ်မှ ပါမောက္ခချုပ် ဒေါက်တာလှတင့်က The Voice သို့ ပြောကြားသည်။
ရန်ကုန် အဝေးသင်တက္ကသိုလ်တွင် ၂၀၁၁ ခုနှစ်က အောင်ချက် ရာခိုင်နှုန်း ၉၀ ကျော်ရှိခဲ့ပြီး ၂၀၁၂ နှစ်တွင် အောင်မှတ်များ တင်းကျပ်သဖြင့် အောင်ချက်ရာခိုင်နှုန်း ၇၀ ကျော် ရှိခဲ့ရာမှ ယခုနှစ်တွင် ထပ်မံတင်းကျပ်ဦးမည် ဖြစ်ရာ သတ်မှတ် အောင်မှတ်အတိုင်း မရရှိသူများကို ထည့်သွင်း စဉ်းစားတော့မည် မဟုတ်သောကြောင့် အောင်ချက် ရာခိုင်နှုန်း ပိုမိုကျဆင်းနိုင်ဖွယ် ရှိကြောင်း ၎င်းက ဆက်လက် ပြောကြားသည်။
“အဝေးသင် တက္ကသိုလ်တွေရဲ့ အရည်အသွေး ပြန်ထိန်းနေပြီ။ ဒီနှစ်တော့ သတ်မှတ် အမှတ်ဝင်မှ အောင်မယ်” ဟု ဒေါက်တာလှတင့်က ပြောဆိုသည်။
ယခုနှစ် စာမေးပွဲတွင် ပါဝင်ဖြေဆိုမည့် အဝေးသင်တက္ကသိုလ် ကျောင်းသား၊ ကျောင်းသူ ၁၅၇,၀၄၇ ဦး ရှိပြီး ပထမ သိပ္ပံ ဘာသာတွဲ အသုတ်တွင် ၂၃,၅၁၄ ဦး၊ ဒုတိယ ဝိဇ္ဇာဘာသာတွဲ အသုတ်တွင် ၅၂,၉၈၇ ဦးနှင့် နောက်ဆုံး ဝိဇ္ဇာဘာသာတွဲ အသုတ်တွင် ၈၀,၅၄၆ ဦး ရှိကြောင်း ၎င်းကဆိုသည်။
အဝေးသင်တက္ကသိုလ် ဘွဲ့ကြိုတန်း ကျောင်းသားများအတွက် အနိမ့်ဆုံး အောင်မှတ် ၅၀ အထိ သတ်မှတ်ထားကြောင်း ၎င်းက ထပ်မံပြောကြားသည်။
“ဒီနှစ်စာမေးပွဲ တင်းကျပ်မယ်လို့တော့ ဆရာမတွေဆီက ကြားထားတယ်” ဟု အဝေးသင် တက္ကသိုလ် ရူပဗေဒ အထူးပြု ဒုတိယနှစ် ကျောင်းသားတစ်ဦးက ဆိုသည်။
ရန်ကုန်နှင့် မန္တလေး အဝေးသင် တက္ကသိုလ် စာမေးပွဲများကို အသုတ်သုံးသုတ် ခွဲခြားကျင်းပသွားရန် စီစဉ်ထားပြီး အောက်တိုဘာလ ၃ ရက်နေ့မှ ၉ ရက်နေ့တွင် ပထမအသုတ် စာမေးပွဲများ စတင်ကျင်းပသွားမည် ဖြစ်ကြောင်း၊ ဒုတိယ အသုတ်ကို အောက်တိုဘာလ ၂၅ ရက်နေ့မှ နိုဝင်ဘာလ ၁ ရက်နေ့အထိ ကျင်းပပြီး တတိယအသုတ်ကို နိုဝင်ဘာလ ၁၈ ရက်နေ့မှ ၂၅ ရက်နေ့ထိ ပြုလုပ်မည် ဖြစ်ကြောင်း ရန်ကုန် အဝေးသင်တက္ကသိုလ်မှ စုံစမ်းသိရှိရသည်။
ရန်ကုန် အဝေးသင်တက္ကသိုလ်တွင် စာဖြေဌာနခွဲ ၁၅ ခုရှိပြီး နှစ်စဉ် ဘွဲ့ကြိုသင်တန်း ကျောင်းသားသစ် ငါးသောင်းနီးပါး လက်ခံသင်ကြားလျက် ရှိသည်။
MRTV-4 နဲ့ ဘယ်တော့မှ ဇာတ်ကားမရိုက်တော့ဘူးဆိုတဲ့ စိုးမိုးကြည်
“ပန်းနုသွေး” ဆိုတဲ့ ဇာတ်လမ်းတွဲကို MRTV-4 နဲ့ လက်တွဲရိုက်ကူးလျှက်ရှိတဲ့ သရုပ်ဆောင် စိုးမိုးကြည်က ဇာတ်ကားရိုက်ကူးနေတဲ့ အချိန်အတွင်းမှာပဲ တစ်ဦးနဲ့တစ်ဦး အပေးအယူမမျှတဲ့အတွက်ကြောင့် ရိုက်ကူးရေး ရပ်ခဲ့ပြီး နောက်ပိုင်းမှာလည်း MRTV-4 နဲ့ ဘယ်တော့မှ ဇာတ်ကား မရိုက်တော့ဘူးရယ်လို့ အတိအလင်း ပြောဆိုခဲ့ပါတယ်။
စိုးမိုးကြည်က “ သူတို့ ဒီကားရိုက်ဖို့အတွက် အစ်မနဲ့ ရက်ရော၊ ငွေရောညှိတယ်။ ဒီကားကို (၁၅) ရက်နဲ့ ရိုက်ဖို့ သဘောတူခဲ့တယ်။ ရိုက်နေရင်း (၁၅) ရက်နဲ့ မပြီးတော့ (၄) ရက် ထပ်တောင်းတယ်။ အဲဒီ (၄) ရက်နဲ့ မပြီးနိုင်တော့ နောက်ထပ် (၈) ရက် ထပ်တောင်းတယ်။ (၈) ရက်နဲ့ မပြီးနိုင်မှန်းသိလို့ အစ်မက (၁၀) ရက်ယူဖို့ ပြောတယ်။ (၂) ရက်ပိုပေးလိုက်တယ်။ အဲဒီ (၁၀) ရက်အတွက် ဈေးညှိပြီးသွားပြီ။ ဒီ (၁၀) ရက်နဲ့လည်း သူတို့က ရိုက်လို့မပြီးသေးဘူး။ နောက်ထပ် (၄) ရက်၊ (၅) ရက်နဲ့ မပြီးသေးဘူးဆိုတာ အစ်မ သဘောပေါက်ပါတယ်။ အစ်မ ဆက်မရိုက်တော့ဘဲ ပေါက်ကွဲ သွားတဲ့ အချက်က သြဂုတ်လ (၃၁) ရက်ညမှာ နိုက်ဆင်းကို ည (၁၁) နာရီက စရိုက်တယ်။ လူတွေ အစောကြီး ခေါ်ပြီး (၇) နာရီ (၈) နာရီ လောက် ဒီအတိုင်းထိုင်ခိုင်းပြီး ည (၁၁) နာရီမှ စရိုက်တယ်။ ပြီးတော့ နိုက်ဆင်းချည်းပဲ (၄)ရက်၊ (၅) ရက် ဆက်တိုက်ရိုက်တော့ ဘယ်သူမှ မခံနိုင်ကြဘူး။ ကိုယ်တွေလို Actor ကြီးတွေတောင် မခံနိုင်တာ ကလေးတွေက ပိုဆိုးတာပေါ့။ သူတို့လည်း မပြောရဲလို့သာ မပြောဘဲ ဒီအတိုင်း ရိုက်ကြတာ” ဆိုပြီး ဖြစ်ကြောင်း ကုန်စင်ကို ပြောပြပါတယ်။
ဒုက္ခသည် အမျိုးသမီး တဦး ပဟေဠိဆန်စွာ သေဆုံး
ထိုင်း-မြန်မာ နယ်စပ် မယ်လ ဒုက္ခသည်စခန်းက အသက် ၃၇ နှစ်အရွယ် အမျိုးသမီးတဦး ၂ ရက်ကြာ ပျောက်ဆုံးနေရာ က ဒီနေ့မနက်ပိုင်းမှာ ဒုက္ခသည်စခန်း အပြင်ဘက် ကားလမ်းဘေးက တောအုပ်ကြားကနေ သူ့ အလောင်းကို ပြန်လည် တွေ့ရှိရတယ်လို့ တာဝန်ရှိသူတွေက ပြောပြပါတယ်။
မရွှေလှအေး လို့ခေါ်တဲ့ အဲဒီ ကရင် အမျိုးသမီးဟာ တနင်္လာနေ့ နေ့လယ်ပိုင်းကတည်းက ပျောက်ဆုံးနေခဲ့တာဖြစ်ပြီး အင်္ဂါနေ့က ဒုက္ခသည်စခန်းတခုလုံး ၀ိုင်းဝန်းရှာဖွေခဲ့ပေမယ့် မတွေ့ရှိဘဲ ဒီနေ့မနက် ၇ နာရီ လောက်မှ ပြန်လည်တွေ့ရှိခဲ့တာ ဖြစ်ပါတယ်။
“တနင်္လာနေ့က စခန်းတွင်း ရိက္ခာဝေတဲ့ နေ့လေ။ ရိက္ခာ လက်ခံလာယူဖို့ သူ့နာမည်ခေါ်တဲ့အခါ သူ မရှိတော့ဘူး။ ဈေးဆိုင် သွားမယ်ဆိုပြီး ထွက်သွားတာတဲ့။ ညအထိ ပြန်မရောက်တာကြောင့် မိသားစုက လိုက်ရှာခဲ့တယ်။ မတွေ့တော့ ကျမတို့ဆီ အမှုလာတိုင်တယ်။ နောက်နေ့ မနက်အထိ မတွေ့တော့၂၄ ရက်နေ့မှာ သူ့ဓာတ်ပုံတွေကို စခန်းထဲမှာ လိုက်ကပ်ပြီး ထပ်ရှာ တယ်။ ဒီနေ့မနက်မှ စခန်းအပြင်ဘက် စိုးလု ရွာနား သွားတဲ့လမ်းဘေးမှာ ပြန်တွေ့တာ”လို့ ကရင် အမျိုးသမီး အစည်းအရုံး မှ ဒေါ်အေးက ဧရာဝတီကို ပြောပါတယ်။
အပေါ်ဝတ်အကျီ၊ ဘောင်းဘီနဲ့ အတွင်းခံတွေ မရှိတော့ဘဲ ဗလာစီယာ တထည်နဲ့ သူ့ အလောင်းပုံတွေကို ဖေ့စ်ဘုတ် စာမျက်နှာ တခုက တွေ့ရပါတယ်။
ဒုက္ခသည် စခန်းကော်မတီ ဥက္ကဌ စောအောနက်တော့ “သူ့ လည်ပင်းက ကျိုးနေတယ်။ ရင်ဘတ်မှာလည်း တခုခုနဲ့ ထုထားသလိုပဲ။ ဒါပေမယ့် မုဒိမ်းမှု ဟုတ်မဟုတ် ဆိုတာတော့ သေချာမပြောနိုင်ဘူး။ ထိုင်း တာဝန်ရှိသူတွေ စစ်ဆေးနေ တုန်းပါ”လို့ ပြောဆိုပါတယ်။
မနက် ၉ နာရီလောက်မှာပဲ ထိုင်းနိုင်ငံ မယ်လစခန်းနားက မယ်တန်မြို့နယ်က ထိုင်း မှုခင်းရဲ နဲ့ ထိုင်းဆရာဝန်တွေ လာရောက် စစ်ဆေးခဲ့ပြီး မုဒိမ်းမှု ဟုတ်မဟုတ်ဆိုတာ သေချာသိချင်ရင် ဘန်ကောက် ဆေးရုံကိုပို့ပြီး စစ်ဆေးရမယ်လို့ ဆိုတဲ့အတွက် ကျန်ရစ်တဲ့ မိသားစုဝင်တွေက ငွေကြေးမတတ်နိုင်တာကြောင့် တခါတည်း သင်္ဂြိုဟ်ဖို့ ဆုံးဖြတ်လိုက်ကြ ပါတယ်။
“သူတို့က ဗုဒ္ဒဘာသာဝင်တွေဆိုတော့ သူ့အလောင်းကို အိမ်ကို ပြန်မသယ်တော့ဘဲ သချိုင်းကုန်းကို သယ်သွားတယ်။ နောက်ပြီး ဘန်ကောက်သွားပြဖို့လည်း ပိုက်ဆံမရှိတော့ ဒီနေ့ နေ့လယ် ၂ နာရီမှာ သဂြိုဟ် လိုက်ကြတယ်။ ကျမတို့ကတော့ ဓာတ်ပုံမှတ်တမ်း သေချာယူထားပါတယ်”လို့ ဒေါ်အေးက ပြောတယ်။
မရွှေလှအေးဟာ လှိုင်းဘွဲ့မြို့ ဘီးလင်းရွာကဖြစ်ပြီး ဒုက္ခသည်စခန်းက ကုလသမဂ အသိအမှတ်ပြုလက်မှတ်နဲ့ စခန်းထဲမှာ ၁၀ နှစ်ကျော် နေထိုင်ခဲ့သူ ဖြစ်ပါတယ်။ ကလေး၂ ယောက်မိခင် မုဆိုးမ တဦးဖြစ်ပြီး မောင်နှမ၊ အဒေါ်တွေနဲ့ အတူ မယ်လ စခန်း ရပ်ကွက် ၂ (Zone B2) မှာ နေထိုင်တာ ဖြစ်ပါတယ်။
အိမ်နီးနားချင်း တဦး ဖြစ်တဲ့ အမိုးကြီးက “သူက တအားအေးပြီး စကားလည်း သိပ်မပြောတဲ့လူ။ ဘယ်လိုဖြစ်သွားတယ် ဆိုတာ ဘယ်သူမှ အတိအကျ မသိဘူး။ ၂၃ ရက်နေ့လယ်က စပြီး သူပျောက်သွားတာ”လို့ ပြောပြတယ်။
အခုသေဆုံးသူမှာ တက် တတ်တဲ့ ရောဂါရှိပြီး စိတ်သိပ်ပုံမှန် မဟုတ်ဘူးလို့ ပြောကြပါတယ်။ သူ့ရဲ့ နားကပ်နဲ့ ငွေသားတွေ ဒီအတိုင်းရှိနေပြီး အလောင်းကလည်း ပုပ်လာနေတာကြောင့် မုဒိမ်းကျင့်ခံရတာ ဟုတ်မဟုတ်ကို ဘယ်သူမှ အသေအချာ မပြောနိုင်ဘဲ ပဟေဠိလို ဖြစ်နေပါတယ်။
ဒုက္ခသည်စခန်းတွင်းမှာ မုဒိမ်းကျင့်မှုတွေ တနှစ်ကို ၂ မှု ၃ မှု ဖြစ်ပွားမှုရှိပေမယ့် အခုလိုမျိုး စခန်း အပြင်ဘက်မှာ သေဆုံး နေတဲ့ အမှုမျိုးကတော့ ဖြစ်ခဲတယ်လို့ ဒုက္ခသည်တွေက ပြောကြပါတယ်။
မယ်လ ဒုက္ခသည် စခန်းမှာ လူဦးရေ ၅ သောင်းလောက် ရှိတယ်လို့ ဆိုပါတယ်။
ထိုင်း-မြန်မာ နယ်စပ်တလျှောက်မှာ ဒုက္ခသည် စခန်း ၉ ခုရှိပြီး ဒုက္ခသည် တသိန်း ခြောက်သောင်း လောက် ရှိကြောင်း ကူညီ ကယ်ဆယ်ရေးနဲ့ အထောက်အပံ့ပေးရေး အဖွဲ့တွေရဲ့ စာရင်းအရ သိရတယ်။
အဲဒီ စခန်းတွေကတော့ မယ်လ၊ အုန်းဖျန်၊ နို့ဖိုး၊ မယ်လဦး၊ မယ်ရာမို၊ ထန်ဟင်း၊ ဘန့်ဒုံယမ်း စတဲ့ စခန်း ၇ ခုနဲ့ ကရင် နီ စခန်း အမှတ် (၁)၊ အမှတ် (၂) စခန်းတို့ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒုက္ခသည်တွေဟာ အစိုးရတပ်တွေရဲ့ ထိုးစစ်ဆင်မှုကြောင့် ၁၉၈၃ ခုနှစ်လောက်ကတည်းက စတင် ထွက်ပြေး ရောက်ရှိလာကြသူတွေ ဖြစ်တယ်လို့ သိရပါတယ်။
ညီမစိတ်ကောက်တိုင်း သူက ချော့တယ်ဆိုတာ မရှိခဲ့ဘူးဆိုတဲ့ နန်းသူဇာ
ကျော်ထွဋ်ဆွေနဲ့နန်းသူဇာတို့ရဲ့ နှလုံးသားရင်ခုန်သံပန်းခင်းဆီသို့ အလည်တစ်ခေါက်
ဘ၀ရဲ့ ရင်ခုန်စရာ အခိုက်အတန့်တွေထဲမှာ ချစ်ခွင့်ပန်ရခြင်းဟာလည်း တစ်ခုအပါအ၀င်ပဲဖြစ်ပါတယ်။ တစ်ဘက်လူ အနေအထား ဘယ်လိုရှိမယ်ဆိုတာ မသိဘဲ လောင်းကြေးထပ်ရတာတွေထဲမှာ ချစ်ခွင့်ပန်ရခြင်းက စိတ်လှုပ်ရှားစရာအကောင်းဆုံးပါပဲ။ ကံကောင်းသူတွေက ချစ်ခွင့်ပန်တာနဲ့ တစ်ပြိုင်နက် အဖြေ ပြန်ရကြလေ့ရှိသလို တချို့တွေကလည်း စဉ်းစားဦးမယ်ဆိုတဲ့ စကားနဲ့ ဆိုင်းငံ့ခံကြရလေ့ရှိပါတယ်။ ဒါပေမယ့် မိန်းကလေးဘက်က စဉ်းစားမယ် ပြောဆိုတာနဲ့ ချစ်ခွင့်ပန်သူ ယောင်္ကျားလေးဟာ ငါးဆယ်ရာခိုင်နှုန်း ပျော်ခွင့်ရဖို့ ကျိန်းသေသလောက် ရှိသွားပါပြီ။ သူစဉ်းစားနေချိန်မှာ သူ့အလိုကို လိုက်ပြီး သူ့အကြိုက်ဆောင်နိုင်ခဲ့ရင် မိန်းကလေးတိုင်းက “ချစ်တယ်” ဆိုတဲ့ အဖြေကို ပြန်ပေးကြတာပါပဲ။ ချစ်ခွင့်ပန်စဉ်အခိုက် နှလုံးသားစည်းချက်တွေ ဘယ်လို ဗြောင်းဆန်နေခဲ့တယ်ဆိုတဲ့ အကြောင်း ဒီတစ်ပတ် စကားပြောဖို့ ရည်ရွယ်ထားသူကတော့ တေးသံရှင် မော်ဒယ်လ် မိန်းမချောလေး နန်းသူဇာ ပဲဖြစ်ပါတယ်။
သူ့ကို စတွေ့ချိန်က ၂၀၁၁ သင်္ကြန်မှာပါ။ သူနဲ့ ညီမနဲ့က မခင်ကြဘူး။ ဒါပေမယ့် သူ့အကြောင်းတွေကို လင်းပင်ဟိန်း ဆီကနေ ကြားဖူးတယ်။ အဲဒီတော့ သူနဲ့ စကားမပြောဖူးပေမယ့် သူ့အကြောင်းကို ညီမသိနေတယ်။ ညီမ မထင်ထားတဲ့တစ်ရက် သူက ညီမဆီ စဖုန်းဆက်တယ်။ ဖုန်းပြောပြီး ညီမတို့ စခင်သွားကြတယ်။ အဲဒီနောက်ပိုင်းကျမှ ဒဂုံမှာ မေဂျာအတူတူ ကျောင်းတက်နေကြတာကို သိကြတယ်။ သူရောညီမရော အီးမေဂျာပဲ။ အတန်းသာမတူတာ။ သူက ညီမထက် ကျောင်းခြောက်နှစ်လောက် စောတက်ပေမယ့် အတန်းကျတော့ ညီမထက် ပိုငယ်တယ်။ ချစ်တယ်ဆိုပြီးပြောတာကတော့ ဖုန်းထဲကပဲ။ စနောက်ပြီးပြောလိုက်၊ အတည်ပြောလိုက်နဲ့ ခဏခဏပြောတယ်။ အပြင်မှာ တွေ့ရင်တော့ မပြောဘူး။ ဒီလိုနဲ့ သူ့မွေးနေ့မှာ ညီမဆီက အဖြေတောင်းတော့ ညီမလည်း အဖြေပေးဖြစ်သွားတယ်။
သူနဲ့ တွဲလာတဲ့အချိန်မှာ သူ့ရဲ့ဆိုးတဲ့အကျင့်တွေကို သိလာရတယ်။ သူက တော်တော်စိတ်ကြီးတယ်။ ညီမလည်း ဘေးကနေ ပြင်ပေးပေမယ့် ပြင်ပေးလို့မရဘူး။ နောက်ပြီး ညီမစိတ်ကောက်တိုင်း သူကမချော့ဘူး။ သူချော့တာ ရှားတယ်။ ကိုယ့်ဘာသာ ကိုယ်ပဲ စိတ်ဖြေရတယ်။ ညီမက ချစ်သူပဲ ဖြစ်ဖြစ်၊ သူငယ်ချင်းပဲ ဖြစ်ဖြစ် အကြာကြီးတော့ စိတ်မကောက်တက်ဘူး။သူက ကိုယ်စိတ်ကောက်လည်း နေနိုင်တယ်။ သူ့ရဲ့အိမ်မှာ သူငယ်ချင်းတွေ အမြဲရှိတော့ ကိုယ်နဲ့ စိတ်ဆိုးထားရင်တောင် ဒါကို သတိမရဘူး။ ညီမကျတော့ အဲဒီလိုမဟုတ်ဘူး။ သူငယ်ချင်း သိပ်မရှိဘူး။ အိမ်မှာ တစ်ယောက်တည်းဆိုတော့ အဲဒီလို မလုပ်နိုင်ဘူး။ အဲဒီတော့ ညီမဘက်က ပြန်ပြီး ချော့ရတာပေါ့။ သူ့မှာ ကောင်းတာလေးတွေလည်း ရှိတယ်။ စိတ်ကြီးပြီး ကြမ်းတမ်းတယ်လို့ ထင်ရပေမယ့် တစ်ခါတစ်လေကျရင်တော့ ကလေးတစ်ယောက်လိုပဲ။ လူကို ပျော်အောင်ထားတက်တယ်။ ဟာသဥာဏ်လည်း ရှိတယ်။ ပြဿနာတွေဖြစ်ရင် ၀င်ပြီး ဖြေရှင်းပေးတက်တယ်။ သူငယ်ချင်းတွေနဲ့ရော ၊ အားလုံးနဲ့ သဟဇာတဖြစ်အောင် နေထိုင်တက်တယ်။ သူက ညီမတွက် နောက်ဆုံးအချစ်ပဲ ဖြစ်စေချင်တယ်။ အဲဒီလိုဖြစ်ဖို့က သူ့အပေါ်မှာ မူတည်တယ်။ သူက ညီမအပေါ် သစ္စာရှိရင်တော့ လက်တွဲဖော် ဖြစ်သွားနိုင်ပါတယ်။ အခုတော့ ချစ်သူသက်တမ်း နှစ်နှစ်ခွဲရှိပြီ။ သူနဲ့ ပတ်သက်တဲ့ အမှတ်တရကတော့ အများကြီးပဲ။ အခုနောက်ပိုင်းတွေဆို နှစ်ယောက်အတူတူ ပွဲတွေ တက်လာခွင့်ရတာကလည်း ပျော်စရာ အမှတ်တရတွေပါပဲ။ ညီမပျော်ရွှင်သလို လူတိုင်းလည်း အချစ်ရေး အဆင်ပြေပြီး ပျော်ရွှင်နိုင်ပါစေလို့ ဆုတောင်းပေးပါတယ်။
မန္တလေးတွင် ကွမ်းမစားရ နယ်မြေများ သတ်မှတ်မည်
စည်းကမ်းမဲ့ ကွမ်းတံတွေးထွေးမှု များကြောင့် လမ်းများ ညစ်ပတ်ကာ မြို့တော် သာယာလှပမှုကို အကျည်းတန်စေ သည့်အပြင် အလွန်အကျွံ စားပါက ရောဂါရသည်အထိ ဖြစ်စေသော ကွမ်းစားသုံးမှုဓလေ့ များပြားလာလျက်ရှိရာ မန္တလေးမြို့တော်တွင် ကွမ်းမစားရနယ်မြေများ သတ်မှတ်ကာ စည်းကမ်းမဲ့ ကွမ်းစားခြင်းနှင့် ပတ်သက်၍ အသိပညာပေး ဆောင်ရွက်သွားမည်ဖြစ် ကြောင်း မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး အစိုးရအဖွဲ့ စည်ပင်သာယာရေး ဝန်ကြီး ဦးအောင်မောင်း က ပြောကြားသည်။
မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး လွှတ်တော်ရုံးတွင် စက်တင်ဘာလ ၂၄ ရက်နေ့က ပြုလုပ်သော ပထမအကြိမ် မန္တလေးတိုင်း ဒေသကြီး လွှတ်တော်သတ္တမ ပုံမှန်အစည်းအဝေး၌ ဝန်ကြီးဦးအောင်မောင်းက အထက်ပါအတိုင်း ထည့်သွင်းပြောကြားခြင်း ဖြစ်သည်။
မန္တလေးမြို့တော်တွင် ယင်းကဲ့သို့ ကွမ်းမစားရနယ်မြေများ သတ်မှတ်ပြီး ကွမ်းစားခြင်းကြောင့် ပတ်ဝန်းကျင်ထိခိုက်မှု မရှိစေရေး အတွက် အမှိုက်ပုံးများ ထားရှိခြင်းနှင့် FM အသံလွှင့်ဌာနများ၊ သတင်းစာ၊ ဂျာနယ်များတွင် ဖော်ပြ၍ အသိပညာပေး ဆောင်ရွက်သွားမည် ဖြစ်ကြောင်း ဝန်ကြီးက ထပ်လောင်းပြောကြားသည်။
မည်သည့်နေရာများကို ကွမ်းမစားရဇုန် သတ်မှတ်မည်၊ မည်သည့်အချိန်တွင် စတင် အရေးယူမည်နှင့် မည်သို့အရေးယူမည် စသည့် အသေးစိတ်အချက်အလက် များကို မသိရှိရသေးပေ။
ချမ်းအေးသာစံမြို့နယ် မဲဆန္ဒနယ် အမှတ် ၂ မှ ဒေါ်တင်တင်မာ (ဒီမိုကရက်တစ်ပါတီ - မြန်မာ)က မြန်မာဓလေ့တစ်ခု ဖြစ်သော ကွမ်းစားခြင်းကို တစ်ဖက်မှ ကာကွယ်ထိန်းသိမ်းခြင်း ပြု၍ တစ်ဖက်မှ ပညာပေး အရေးယူရန် မေးခွန်းမေးမြန်း ခဲ့ခြင်းနှင့် ပတ်သက်၍ ဝန်ကြီးက ယင်းကဲ့သို့ ပြန်လည်ဖြေကြားခြင်း ဖြစ်သည်။
"ဒီအစီအစဉ် ကောင်းပါတယ်။ ကွမ်းစားသူတွေက စည်းကမ်းမဲ့ ကွမ်းတံတွေး ထွေးခြင်းကို ရှောင်ကြဉ်ပြီး မန္တလေးမြို့တော်ကို သန့်ရှင်းလှပအောင် ဝိုင်းဝန်းကူညီ ဆောင်ရွက်သင့်ပါတယ်" ဟု မန္တလေးမြို့ခံ စာရေးဆရာတစ်ဦးက အကြံပြု ပြောကြားသည်။
သမ္မတဦးသိန်းစိန်က ထာဝရ ငြိမ်းချမ်းရေး ရရှိရေးအတွက် အတွေ့အကြုံ၊ အကြံဉာဏ်များ မျှဝေပေးရန် ကမ္ဘာ့ခေါင်းဆောင် ဟောင်းများအဖွဲ့နှင့် တွေ့ဆုံစဉ် တောင်းဆို
နိုင်ငံတော်သမ္မတ ဦးသိန်းစိန်သည် ထာဝရ ငြိမ်းချမ်းရေး ရရှိရေးအတွက် အတွေ့အကြုံ၊ အကြံဉာဏ်များ မျှဝေပေးရန် မြန်မာနိုင်ငံသို့ ရောက်ရှိနေသည့် အမေရိကန်နိုင်ငံ သမ္မတဟောင်း နိုဗယ်ငြိမ်းချမ်းရေးဆုရှင် ဂျင်မီကာတာ ဦးဆောင်သော ကမ္ဘာ့ခေါင်းဆောင် ဟောင်းများအဖွဲ့ (The Elders) အဖွဲ့ဝင်များအား စက်တင်ဘာ ၂၅ ရက် မွန်းလွဲ ၂ နာရီခွဲတွင် နေပြည်တော်ရှိ နိုင်ငံတော်သမ္မတ အိမ်တော်ရှိ ဧည့်ခန်းမဆောင်၌ လက်ခံတွေ့ဆုံရာတွင် တောင်းဆိုခဲ့သည်။
ယင်းသို့ တွေ့ဆုံရာတွင် အမေရိကန် သမ္မတဟောင်း ဂျင်မီကာတာနှင့်အတူ ကမ္ဘာ့ခေါင်းဆောင် ဟောင်းများအဖွဲ့(The Elders) အဖွဲ့ဝင်များဖြစ်သော ဖင်လန်နိုင်ငံ သမ္မတဟောင်း နိုဗယ်ငြိမ်းချမ်းရေးဆုရှင် မာတီအာတီဆာရီ၊ နော်ဝေနိုင်ငံ ၀န်ကြီးချုပ်ဟောင်း ဒေါက်တာဂရိုဟာလမ်ဘရန့်တ်လန်းတို့ ပါဝင်ကြောင်း သိရသည်။
ထိုသို့ တွေ့ဆုံရာ၌ သမ္မတဦးသိန်းစိန်က အဆွေတော်တို့ အနေဖြင့် ယခုကဲ့သို့ ကမ္ဘာ့လူသားများ၏ အကျိုးကို ရှေးရှုပြီး လိုက်လံကူညီ ဆောင်ရွက်ပေးနေသည့် အတွက် များစွာဝမ်းမြောက် ဂုဏ်ယူမိကြောင်း၊ မိမိတို့ နိုင်ငံအတွင်း လက်နက်ကိုင် တိုင်းရင်းသားများနှင့် ငြိမ်းချမ်းရေး ရရှိရေးအတွက် ဆောင်ရွက်လျက် ရှိရာတွင် အောင်မြင်မှုများ ရှိသကဲ့သို့ အခက်အခဲများလည်း ကြုံတွေ့ရကြောင်း၊ လက်ရှိအချိန်တွင် နိုင်ငံတစ်ဝန်းနီးပါး သေနတ်သံများ ချုပ်ငြိမ်းသွားပြီး နယ်စပ်ဒေသ အများအပြားတွင် ငြိမ်းချမ်းရေး အသီးအပွင့်များကို ခံစားနေရပြီဖြစ်ကြောင်း ပြောကြားခဲ့သည်။
ထို့အပြင် မကြာမီ တစ်နိုင်ငံလုံး အတိုင်းအတာဖြင့် ငြိမ်းချမ်းရေး သဘောတူညီချက်အား လက်မှတ်ရေးထိုးနိုင်ရန် ဆောင်ရွက်လျက် ရှိကြောင်း၊ အပစ်အခတ်များ ရပ်စဲသော်လည်း ရေရှည်တည်တံ့သော ငြိမ်းချမ်းရေးရရှိရန် နိုင်ငံရေး ဆွေးနွေးပွဲများ ဆက်လက်ကျင်းပရန် ကျန်ရှိနေပါ သေးကြောင်း၊ သမ္မတဦးသိန်းစိန်က ပြောကြားသည်။
တွေ့ဆုံမှုတွင် ငြိမ်းချမ်းရေး ကိစ္စရပ်များသာမက ဖွဲ့စည်းပုံ အခြေခံဥပဒေပြင် ဆင်ရေးဆွဲရေး ဆိုင်ရာများ၊ ရခိုင်ပြည်နယ်တွင် ဖြစ်ပွားခဲ့သည့် ပဋိပက္ခများအား ကုလသမဂ္ဂ၊ နိုင်ငံတကာ အဖွဲ့အစည်းများ၊ အစိုးရ မဟုတ်သော အဖွဲ့အစည်းများ၊ စေတနာရှင်များနှင့် ပူးပေါင်း၍ ပညာရေး၊ ကျန်းမာရေး၊ ကလေးသူငယ် စောင့်ရှောက်ရေး၊ နေထိုင်စားသောက်ရေး၊ လူမှုစီးပွားဘ၀ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး၊ လူမျိုးစုနှစ်စုအကြား အတူတကွ ယှဉ်တွဲနေထိုင်နိုင်ရေး၊ ထာဝရ ရင်ကြားစေ့ရေး တို့အတွက် ဖြေရှင်းဆောင်ရွက်နေမှုများ၊ ၂၀၁၃ ခုနှစ် နှစ်ကုန်တွင် နိုင်ငံရေး အကျဉ်းသား မကျန်ရှိရအောင် ဆောင်ရွက်နေမှုများနှင့် စပ်လျဉ်း၍ ဆွေးနွေးခဲ့ကြကြောင်း နိုင်ငံတော် သမ္မတရုံး၏ ထုတ်ပြန်မှုအရ သိရသည်။
ကမ္ဘာ့ခေါင်းဆောင် ဟောင်းများအဖွဲ့ (The Elders) အဖွဲ့ဝင်များသည် စက်တင်ဘာ ၂၅ ရက် ညနေပိုင်းတွင် ပြည်ထောင်စု ရွေးကောက်ပွဲ ကော်မရှင်ရုံး၌ ရွေးကောက်ပွဲ ကော်မရှင်ဥက္ကဋ္ဌ ဦးတင်အေးအား သွားရောက်တွေ့ဆုံခဲ့ပြီး ရွေးကောက်ပွဲ လုပ်ငန်းစဉ်များ ပိုမိုဖွံ့ဖြိုး တိုးတက်အောင် ဆောင်ရွက်နိုင်ရေး၊ ၂၀၁၅ ခုနှစ်တွင် ကျင်းပမည့် ရွေးကောက်ပွဲအတွက် ပြင်ဆင်ဆောင်ရွက် နေမှုများ၊ သမ္မတ ရွေးကောက်ပုံစနစ်၊ ရွေးကောက်ပွဲတွင် လေ့လာရေး အဖွဲ့များ၊ ခွင့်ပြု၊ မပြု၊ အခြားနိုင်ငံ ရွေးကောက်ပွဲများသို့ သွားရောက် လေ့လာမှု အခြေအနေများ၊ နိုင်ငံတကာ ရွေးကောက်ပွဲဆိုင်ရာ အတွေ့အကြုံများကို ဆွေးနွေးခဲ့ကြကြောင်း သိရသည်။
ဆက်လက်၍ အမေရိကန် သမ္မတဟောင်း ဂျင်မီကာတာ ဦးဆောင်သည့် The Elders အဖွဲ့ဝင်များသည် ညနေ ၅ နာရီ ခန့်တွင် လွှတ်တော်ရေးရာဆောင် I-1 တွင် ပြည်သူ့လွှတ်တော် ဒုတိယဥက္ကဋ္ဌ ဦးနန္ဒကျော်စွာအား တွေ့ဆုံ၍ မြန်မာနိုင်ငံ၏ ဒီမိုကရေစီ ကူးပြောင်းရေးတွင် ပါဝင်ဆောင်ရွက်ရေး၊ လူ့အခွင့်အရေးဆိုင်ရာနှင့် လွှတ်တော်ဆိုင်ရာ ကိစ္စရပ်များ ဆွေးနွေးခဲ့ကြကြောင်း သိရသည်။ ထို့ပြင် ၎င်းတို့သည် သီတဂူဆရာတော် အရှင်ဥာဏိဿရ၊ အစ္စလာမ် ဘာသာရေးအဖွဲ့မှ ဦးအေးလွင်၊ ၈၈ မျိုးဆက် ငြိမ်းချမ်းရေးနှင့် ပွင့်လင်းလူ့ အဖွဲ့အစည်းမှ ဦးမင်းကိုနိုင်တို့ကို ရန်ကုန်မြို့၌ သီးခြားစီတွေ့ဆုံ ဆွေးနွေးခဲ့သည်။
(စက်တင်ဘာ ၂၅ ရက်က သမ္မတဦးသိန်းစိန်နှင့် အမေရိကန် သမ္မတဟောင်း ဂျင်မီကာတာတို့ နေပြည်တော်တွင် တွေ့ဆုံစဉ် (ဓာတ်ပုံ- သမ္မတရုံးဝက်ဘ်ဆိုက်))
တပ်မတော်အရာရှိတစ်ဦး အသတ်ခံရမှု စုံစမ်းပြီး အကြောင်းပြန်မည်ဟု ကေအိုင်အို ဆို
တပ်မတော်မှအရာရှိတစ်ဦး ကချင် တွင် အသတ်ခံရမှုနှင့်ပတ်သက်၍ ကေ အိုင်အိုဘက်မှ စုံစမ်းပြီး ဟုတ် မဟုတ် မကြာမီအကြောင်းပြန်မည်ဟု မြန်မာ ငြိမ်းချမ်းရေး စင်တာမှ သိရသည်။
ပြီးခဲ့သည့် စက်တင်ဘာလလယ်က ကေအိုင်အို နည်းပညာအထောက်အကူ ပြုအဖွဲ့နှင့် MPC နည်းပညာအထောက် အကူပြုအဖွဲ့တို့အကြား တွေ့ဆုံခဲ့ပြီး နောက် ယခုကဲ့သို့စုံစမ်းပြီး အကြောင်း ပြန်မည်ဟု တပ်မတော်သို့ အကြောင်း ကြားထားခြင်း ဖြစ်သည်။
”ဒါက ကောင်းတဲ့ တုံ့ပြန်မှုပါ”ဟု ငြိမ်းချမ်းရေးစင်တာမှ အကြီးတန်းအရာ ရှိတစ်ဦးက ပြောသည်။
ထို့အပြင် ၄င်းကိစ္စသာမကနောက် နောင်တွင် ထိုသို့ မဖြစ်ကြရန်လည်း နှစ် ဖက်တပ်မှူးတို့ ထိန်းထိန်းသိမ်းသိမ်းလုပ် ကိုင်သွားရန်လည်း သဘောတူညီမှုအချို့ ရှိခဲ့သည်ဟု ၄င်းထံမှ ထပ်မံသိရသည်။
”စစ်ပွဲနဲ့ရာဇဝတ်မှုဆိုတာက ပြည် တွင်းစစ်ဖြစ်နေတဲ့ နိုင်ငံမှာ ဆုံးဖြတ်ရ ခက်ပါတယ်”ဟု ၄င်းက သုံးသပ်သည်။
သြဂုတ်လ ၂၈ ရက်နေ့က နှစ် ဖက်တပ်များ ထိတွေ့ခဲ့ကြရာမှတစ်ဆင့် မြန်မာစစ်တပ်အရာရှိ ခေါင်းဖြတ်ခံရ ကာသေဆုံးခဲ့ကြောင်း ကာကွယ်ရေး ဝန်ကြီးဌာနက သတင်းထုတ်ပြန်ခဲ့ပြီး သမ္မတရုံးမှ ယင်းကိစ္စကို ဖြေရှင်းပေးရန် ကေအိုင်အိုဘက်သို့လည်း တောင်းဆိုခဲ့ သည်။
ကေအိုင်အိုပြောခွင့်ရပုဂ္ဂိုလ် ဦးလ နန်ကမူ တပ်မတော်သား ကျဆုံးသွားမှု ကိုအတည်ပြုထားခဲ့သော်လည်း ၄င်းတို့ ခေါင်းဖြတ်၍မသတ်ဟု မီဒီယာများသို့ ဖြေကြား ခဲ့သည်။
ကမ္ဘာ့ခေါင်းဆောင်ဟောင်းများအဖွဲ့ ကိုမင်းကိုနိုင်နဲ့တွေ့ဆုံဆွေးနွေး
မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ နိုင်ငံရေးဖြစ်စဉ်တွေမှာ အစိုးရ၊ လွှတ်တော်၊ လွှတ်တော်ပြင်ပ အင်အားစုတွေနဲ့ တိုင်းရင်းသား အဖွဲ့အစည်းတွေအားလုံး သဘောတူကျေနပ်တဲ့ နိုင်ငံရေးဖြစ်စဉ်တွေ လိုအပ်တယ်လို့ မြန်မာနိုင်ငံကို ရောက်ရှိနေတဲ့ The Elders ကမ္ဘာ့ခေါင်းဆောင်ဟောင်းများအဖွဲ့က သုံးသပ်ကြောင်း ဒီနေ့တွေ့ဆုံခဲ့တဲ့ ၈၈ မျိုးဆက် ကျောင်းသားခေါင်းဆောင် ကိုမင်းကိုနိုင်က RFA ကို ပြောပါတယ်။
ရန်ကုန်မြို့ Strand Hotel မှာ ဒီကနေ့ မနက်ပိုင်းက အမေရိကန်သမ္မတဟောင်း Jimmy Carter ဦးဆောင်တဲ့အဖွဲ့ဟာ ၈၈ မျိုးဆက်ကျောင်းသားခေါင်းဆောင် ကိုမင်းကိုနိုင်နဲ့ တွေ့ဆုံဆွေးနွေးခဲ့တာပါ။ အဲဒီမှာ မြန်မာနိုင်ငံမှာ လိုအပ်နေတဲ့ နိုင်ငံရေးဖြစ်စဉ်အကြောင်း ဆွေးနွေးဖြစ်တယ်လို့ ကိုမင်းကိုနိုင်က ပြောပါတယ်။
“အားလုံးပါဝင်ဖြေရှင်းနိုင်တဲ့ နိုင်ငံရေးဖြစ်စဉ်ဆိုတဲ့နေရာမှာ ဘယ်လောက်ကျယ်ပြန့်တဲ့ ကိုယ်စားပြုမှု ဖြစ်မလဲပေါ့ဗျာ၊ ကိုယ်စားပြုမှုတွေ ပြည့်စုံဖို့လည်းလိုတယ်၊ နောက်ပြီးတော့ အစိုးရကချည်းပဲချမှတ်တဲ့ ဖြစ်စဉ်မျိုးလည်း မဖြစ်ရဘူးပေါ့ဗျာ၊ ဆိုလိုတာကတော့ အစိုးရအဖွဲ့ရှိမယ်၊ လွှတ်တော်ရှိမယ်၊ လွှတ်တော်ပြင်ပမှာရှိတဲ့ အင်အားစုတွေရှိမယ်၊ နောက်တိုင်းရင်းသား အဖွဲ့အစည်းတွေရှိမယ်၊ အားလုံးက သဘောတူကျေနပ်တဲ့ နိုင်ငံရေးဖြစ်စဉ် ပူးပေါင်းပါဝင်မှုတွေ အဲဒါမျိုးဖြစ်စေချင်တာပေါ့၊ ဒါကို သူတို့ကလည်း ဒီကိစ္စမျိုးတော့ သဘောထားတူပါတယ်”
ကမ္ဘာ့ခေါင်းဆောင်းဟောင်းများအဖွဲ့ဟာ ဒီနေ့မနက်ပိုင်းကလည်း သီတဂူဆရာတော် အရှင်ဥာဏိဿရနဲ့လည်း တွေ့ဆုံဆွေးနွေးခဲ့ပါတယ်။
ဒီအဖွဲ့ဟာ မြန်မာနိုင်ငံကို ၃ ရက်ကြာ ခရီးထွက်ခွာလာတာဖြစ်ပြီး ခရီးစဉ်အတွင်း နိုင်ငံရေး၊ လူမှုရေးနဲ့ ဘာသာရေးနယ်ပယ် အသီးသီးက ခေါင်းဆောင်တွေနဲ့လည်း တွေ့ဆုံဆွေးနွေးမယ်လို့ သိရပါတယ်။
အဲဒီကမ္ဘာ့ခေါင်းဆောင်းဟောင်းများအဖွဲ့ကိုတော့ နိုဘယ်ငြိမ်းချမ်းရေးဆုရှင် အမေရိကန်သမ္မတဟောင်း ဂျင်မီကာတာက ဦးဆောင်ပြီး ဖင်လန်သမ္မတဟောင်း နိုဘယ်ငြိမ်းချမ်းရေးဆုရှင် Martti Ahtisaari နဲ့ ကမ္ဘာ့ကျန်းမာရေးအဖွဲ့ WHO ရဲ့ အမှုဆောင်ဒါရိုက်တာဟောင်းဖြစ်တဲ့ နော်ဝေဝန်ကြီးချုပ်ဟောင်း Gro Harlem Brundtland တို့ လိုက်ပါလာပါတယ်။
ကြေးနီစီမံကိန်း ကော်မတီကို ဒေသခံများ ဆန္ဒပြ
စစ်ကိုင်းတိုင်း မုံရွာခရိုင် လက်ပံတောင်းတောင်ဒေသက ဒေသခံ ၄၀၀ ကျော်က ကြေးနီစီမံကိန်း လုပ်ငန်းဖော်ဆောင်ရေးကော်မတီဟာ ပွင့်လင်းမြင်သာမှုမရှိဘူးဆိုပြီး တုံရွာထိပ်ကနေ ဆည်တဲ၊ ဇီးတောရွာ သစ်ထိပ်အထိ ဒီနေ့ ချီတက်ဆန္ဒပြခဲ့ကြပါတယ်။
ဒီဆန္ဒပြပွဲမှာ လက်ပံတောင်းတောင်ဒေသက ကျေးရွာ ၁၀ ရွာက ရွာသားတွေ ပါဝင်တယ်လို့ ပြောပါတယ်။ စီမံကိန်းမဖျက်သိမ်းပေးနိုင်ရင် လုပ်ငန်းကော်မတီအနေနဲ့ ဒေသခံရွာသားတွေကို စီမံကိန်းနဲ့ ပတ်သက်ပြီး ရှင်းလင်းပြစေလိုကြောင်း တုံရွာသား ကိုမင်းမင်းက ပြောပါတယ်။
“ဆန္ဒပြရတဲ့ အဓိကရည်ရွယ်ချက်က လက်ပံတောင်းတောင် ကြေးနီစီမံကိန်း လုံးဝဖျက်သိမ်းပေးဖို့ရယ်၊ ကြေးနီစီမံကိန်းကို မဖျက်သိမ်းနိုင်ခဲ့ရင်လည်း လက်ပံတောင်း ကြေးနီစီမံကိန်း စုံစမ်းစစ်ဆေးရေး ကော်မရှင်ရဲ့ အစီရင်ခံစာအတိုင်း လိုက်နာပြီးတော့ အကောင်အထည်ဖော်ပေးဖို့ပါခင်ဗျ”
ဒေသခံတွေက ကြေးနီစီမံကိန်းကို ဖျက်သိမ်းပေးရေး၊ ပုဒ်မ ၁၄၄ ကို ဖျက်သိမ်းပေးရေး၊ ဇီးတောကျေးရွာကို အကြမ်းဖက်တဲ့ သတင်းတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကို အရေးယူပေးရေးစတဲ့ အချက်တွေကို ကြွေးကြော်ခဲ့ကြပါတယ်။
လက်ပံတောင်းတောင် ကြေးနီစီမံကိန်း လုပ်ငန်းကော်မတီဟာ ဒေသခံတွေနဲ့ တွေ့ဆုံဆွေးနွေးနေတာရှိသလို ဒေသဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် ဆောင်ရွက်ပေးနေတာတွေလည်းရှိတယ်လို့ သိရပါတယ်။ ဇီးတောရွာနားမှာ ဆက်ဆံရေးရုံးဖွင့်လှစ်ထားပြီး တစ်ပတ်တစ်ခါ ဒေသခံတွေနဲ့ တွေ့ဆုံဆွေးနွေးနေတာရှိတယ်လို့ သိရပါတယ်။
ဦးပိုင်နဲ့ ဝမ်ပေါင်ကုမ္ပဏီတို့ရဲ့ လက်ပံတောင်းတာင် ကြေးနီစီမံကိန်းအတွက် ပေးနေတဲ့မြေယာလျော်ကြေးကို လာမယ့်အောက်တိုဘာလ ၁ ရက်နေ့ နောက်ဆုံးယူရမှာဖြစ်ပြီး၊ လျော်ကြေးမယူပဲ လယ်ဆက်လုပ်သူကို အရေးယူမယ်လို့ရဲအရာရှိတစ်ဦးကပြောတဲ့အတွက် ဒေသခံလယ်သမား အယောက် ၄ ရာကျော်လောက် ဒီနေ့ ဆန္ဒပြခဲ့ကြပါတယ်။
မိုးသည်းထန်စွာ ရွာသွန်းမှုနှင့်အတူ နေပြည်တော် နယ်မြေအတွင်း ရေကြီး
စက်တင်ဘာ ၂၄ ရက် ည ၁၁ နာရီ အချိန် ရွာသွန်းခဲ့သော မိုးကြောင့် နေပြည်တော် လယ်ဝေးမြို့နယ်ရှိ ကျေးရွာငါးရွာနှင့် လယ်မြေဧကများစွာ ရေကြီးရေလျှံ နစ်မြုပ်လျက် ရှိကြောင်း သိရသည်။
မိုးသည်းထန်စွာ ရွာသွန်းမှုကြောင့် လယ်ဝေးမြို့နယ် ခရမ်းကိုင်းကျေးရွာ၊ ဗောဓိကုန်းကျေးရွာ၊ ဆင်ဆိပ်ကျေးရွာ၊ ညောင်ကုန်း ကျေးရွာနှင့် သရက်ခုံ ကျေးရွာများနှင့် လယ်မြေဧကများတွင် ရေများ ၀င်ရောက်ကာ နစ်မြုပ်လျက်ရှိသည်။
ခရမ်းကိုင်းကျေးရွာ ဒေသခံတစ်ဦးက ''ည ၁၁ နာရီလောက် ကတည်းက ရွာတဲ့မိုးက မနက် ၁ နာရီ ခွဲလောက်အထိ သဲသဲမဲမဲပါပဲ။ ရေက နံနက် ၃ နာရီ လောက်ကတည်းက ရွာထဲကို ရေတွေဝင်လာတယ်။ မိုးကြီးရင် ရေ၀င်မယ်ဆိုတာ သိပေမယ့် ဒီလောက်အထိ ကြီးမယ်မထင်ဘူး။ မနက်လင်းတော့ အိမ်အောက် မြုပ်နေပြီ။ ရင်စို့လောက်အထိ ရှိတယ်။ အိမ်ကကျွဲတွေ၊ နွားတွေ၊ ၀က်တွေကိုတော့ ရေစ၀င်ကတည်းက လေယာဉ်ကွင်းလမ်းပေါ် ရွှေ့ထားရတယ်'' ဟု ပြောကြားခဲ့သည်။
''လေယာဉ်ကွင်းလမ်း မဖောက်ခင်က ရေကြီးတာ မရှိခဲ့ဘူး။ လေယာဉ်ကွင်းလမ်းက တမံလို ဖြစ်နေတယ်။ ရေထွက်ပေါက်ကလည်း ကိုက် ၅၀၀ နီးပါးမှာ တစ်ခုပဲရှိတယ်။ လေးပေပြွန်ချောင်းဆိုတော့ မိုးများလို့ ရေများရင် ကျွန်တော်တို့ ရွာတွေက အဲဒီဒဏ်ကို ခံစားရတာပဲ။ ရွာတွေက အနိမ့်ပိုင်းဆိုတော့ ပိုဆိုးတာပေါ့။ ဒီလမ်းပေါ်လာပြီး နောက်ပိုင်း စပါးကတော့ စိုက်တာပဲရှိတယ်။ ရတယ်လို့ကို မရှိဘူး။ နှစ်စဉ်ရေကြီးတာနဲ့ ကြုံနေရတယ်။ နည်းတာနဲ့ များတာပဲကွာတယ်။ အခုတော့ ကယ်ဆယ်ရေးတွေ ရောက်နေပါပြီ'' ဟု ဆင်ဆိပ်ရွာမှ ကိုအေးဟန်က ပြောကြားသည်။
''အခုလို အချိန်မှာ အလိုအပ်ဆုံးက သောက်သုံးရေပါပဲ။ ရွာမှာရှိတဲ့ ရေတွင်းတွေက ရေမြုပ်ကုန်ပြီ။ စားစရာထက် ရေပဲ အဓိက လိုအပ်ပါတယ်'' ဟု ခရမ်းကိုင်းကျေးရွာ အုပ်ချုပ်ရေးမှူးက ပြောကြားသည်။
အဆိုပါ ကျေးရွာများသည် ၂၀၁၁ ခုနှစ်တွင်လည်း ရေကြီးမှုကို ကြီးမားစွာ ခံစားခဲ့ရပြီး ရန်အောင်မြင် ဘုရားဝင်း အတွင်းတွင် နေထိုင်ခဲ့ရာ ယခုနှစ်ရေဘေး အတွက်လည်း ယင်းနေရာတွင်ပင် ချထားမည်ဖြစ်ပြီး လယ်ဝေးမြို့ အနီးတွင် ချောင်းမငယ်ဆည်နှင့် ဆင်အုံကန်ရှိပြီး ယခုရေကြီးမှုသည် မိုးရေများ စုစည်းပြီး နိမ့်သည့် ကျေးရွာများတွင် ရေကြီးခြင်း ဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။
စက်တင်ဘာ ၂၅ ရက် နံနက်ပိုင်း ရေကြီးမှုကြောင့် ခရမ်းကိုင်းကျေးရွာ အိမ်ခြေ ၃၉၆၊ လူဦးရေ ၄၄၀ ဦး၊ ဆင်ဆိပ်ကျေးရွာ အိမ်ခြေ ၇၈၊ လူဦးရေ ၈၈ ဦး၊ ညောင်ကုန်းကျေးရွာ အိမ်ခြေ ၂၁၀၊ လူဦးရေ ၂၇၀၊ သရက် ခုံကျေးရွာ အိမ်ခြေ ၁၈၀ တို့ ရေဘေးသင့်နေကြောင်း သိရသည်။
ရေကြီးမှု ဖြစ်စဉ်သို့ ကြက်ခြေနီ အဖွဲ့များ၊ မီးသတ်ယာဉ်များ၊ တပ်မတော်လေနှင့် ကြည်းမှ တပ်မတော်သားများ၊ အေလာမြို့မှ ပရဟိတအဖွဲ့ စသည်ဖြင့် ကူညီကယ်ဆယ်ရန် ရောက်ရှိနေပြီး ထမင်းထုပ်များ၊ ရေဘူးများ ဝေငှလျက် ရှိကြောင်း သိရသည်။
လယ်ဝေးမြို့နယ် အတွင်းရှိ အဆိုပါရွာများ အပြင် အေလာမြို့ အနီးရှိ ရွာသစ်၊ ငှက်ပျောတောရွာ၊ ကြံခင်းစုရွာ များတွင်လည်း ရေကြီးလျက် ရှိကြောင်း သိရသည်။
အလားတူ နေပြည်တော် ကောင်စီနယ်မြေ ဥတ္တရသီရိ မြို့နယ်အတွင်း စက်တင်ဘာ ၂၃ ရက်က ရွာသွန်းခဲ့သော မိုးကြောင့် တောင်ညိုချောင်း ရေလျှံခဲ့ပြီး တောင်ညိုကျေးရွာအုပ်စု၊ ကျောင်းစုကျေးရွာနှင့် ပြည်တော်လင်း၊ သစ်မွှေစု ကျေးရွာများသို့ ရေ၀င်ရောက်ခဲ့ပြီး ရွာများကို ဆက်သွယ်ထားသော သံမဏိ ကြိုးတံတား ကြိုးပြတ်ခဲ့ကြောင်း သိရသည်။
(လယ်ဝေးမြို့နယ် ဆင်ဆိပ်နှင့် ခရမ်းကိုင်းကျေးရွာတို့တွင် ရေကြီးမှုကြောင့် ဒေသခံများကို ရေလွတ်ရာသို့ ရွှေ့ပြောင်းနေစဉ် (ဓာတ်ပုံ - စိုးမင်းထိုက်))
သင့် Android ဖုန်း လုံခြုံရဲ့လား
SmartPhones တွေရဲ့..အမျိုးမျိုးသော...မလုံခြုံတဲ့ Security တွေ ကို ရှောင်လွှဲနိုင်ရန် အတွက်...
မိမိဖုန်းကို သာမာန်ထက်ပိုတဲ့ ဂရုစိုက်မှူမျိုးကိုထားရှိရပါမယ်။...
မိမိဖုန်း အခိုးခံရတာပဲ ဖြစ်ဖြစ်..Data တွေ Hack ခံရတာပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့..
သင်ဂရုမစိုက်လို့ သင့်ဖုန်း ပျောက်သွားတာနဲ့ Phone Noumbers နဲ့ Contacts တွေ ပျောက်တာထက်ဆိုးတဲ့ ရလဒ်ကိုခံစားရမှာပါ..
ကျွန်တော်ဆိုလိုတာက သင့်ရဲ့ အရေးကြီး Message တွေ၊ Mail တွေ၊ ဓါတ်ပုံတွေ ၊ အရေးကြီးဖိုင်တွေနဲ့ သင့်ရဲ့ တကိုယ်ရည်သုံး Password တွေပေ့ါ..
သင်က ကြိုတင်ကာကွယ်မှူတွေ မလုပ်ထားဖူးဆိုရင်. သင်ရဲ့ Imformation တွေကို World Wide Web ကနေပြီး လွယ်လွယ်ကူကူပဲ Trace လုပ်လို့ရပါတယ်..
>>>Android In-Built Security ကို အသုံးပြုပါ..
Android User တော်တော်များများက သူတို့ရဲ့ Password တွေ Bank Account တွေ အရေးကြီးဓါတ်ပုံတွေကို..Android ဖုန်းထဲမှာပဲ လွယ်လွယ်ကူကူမှတ်ထားလေ့ရှိကြတယ်..
ဆိုးကျိုးကတော့ သင့်ဖုန်းကို Hacker တွေက ဖောက်တာပဲ ဖြစ်ဖြစ်..ဖုန်းကျပျောက်တာပဲ ဖြစ်ဖြစ်..ခေါင်းမီးတောက်ရပြီပေ့ါ..
သင့်ဖုန်းက Jelly Bean အသုံးပြုထားတယ်ဆိုရင်တော့ အဲ့ဒီ့ System မှာ ပါရှိတဲ့ Security တွေက လုံခြုံမှူပေးနိုင်ပါတယ်..
Face Unlock,Pattern,Pin,Password အစရှိတာတွေပေါ့။။...
>>>Application တွေကို Lock ချထားပါ...
သင့်အနေနဲ့ အရေးကြီးတယ် လို့ ထင်ရတဲ့ Application တွေကို Lock ချထားပါ..အကုန်လုံး မဟုတ်တောင်မှ တစ်ခုတစ်လေတော့ Lock ချထားပါ..
Lock ချတဲ့ Apk တွေကိုတော့ Play Store ကနေ လွယ်လွယ်ကူကူပဲ Download ဆွဲနိုင်ပါတယ်.. e.g - App L0ck
Premium Features တွေနဲ့ မှ သုံးချင်တယ်ဆိုရင်တော့ Google မှ တဆင့် Paid Application တွေကို ရှာပြီး Download ဆွဲနိုင်ပါတယ်..
>>>Mobile Security Application တစ်ခုခုကို အသုံးပြုပါ..
သင်ဟာ Android ဖုန်းနဲ့ အင်တာနက် အသုံးပြုတဲ့သူဆိုရင် ဒီအချက်ဟာ အရမ်းအရေးကြီးတဲ့ အချက်တစ်ခုပါ..
အများသုံး Wifi Zone မှာ အင်တာနက် သုံးမယ်ဆိုရင်တော့ ပိုလို့တောင် သတိထားရမယ့် အချက်ပါပဲ..
သင့်စက်လေးလံ မှာကို မကြောက်ပဲ Mobile Security Application တစ်ခုကို ထည့်သွင်းထားပေးပါ..
နာမည်ကျော် Antivirus ကုမ္ပဏီ အချို့ကလည်း Mobile ဖုန်းတွေအတွက် Security Application တွေ ထုတ်လုပ်ထားပါတယ်.
e.g- Avast! Mobile Security, Dr-Web , Kaspersky
>>> Data တွေကို Back Up ပြုလုပ်ထားပါ..
သင့်ဖုန်း ပျောက်ရင် ပြန်ဝယ်လို့ ရနိုင်ပေမယ့် ..ဖုန်းထဲက Data တွေကတော့ သင့်အပေါ်မူတည်ပြီး တန်ဖိုးရှိပါတယ်..
အကောင်းဆုံးကတော့ Photo တွေကို Flash Drive ဒါမှ မဟုတ် Computer ထဲမှာ ပုံမှန် သိမ်းဆည်းပေးပါ...
Contacts တွေ Call Logs တွေကိုတော့ Uploading Site တွေ နဲ့ ချိတ်ဆက်ပြီး Online Storage အနေနဲ့ သိမ်းဆည်းထားနိုင်ပါတယ်..
အကြောင်းတစ်ခုခုကြောင့် သင့်ဖုန်းထဲက Data အချို့ ပျက်စီးသွားရင်ပဲ ဖြစ်ဖြစ် Back Up လုပ်ထားတာကြောင့် အလွယ်တကူပြန်ယူသုံးနိုင်မှာပါ..
Back Up Application အချို့ကိုလည်း Play Store ကနေ Download ဆွဲနိုင်ပါတယ်...
<Myanmar IT Group>
ဆင်းရဲနွမ်းပါး မူလတန်းကျောင်းများမှ ကလေးများကို စဉ်ဆက်မပြတ် အာဟာရတိုက်ကျွေးပေးရန် အဆိုလွှတ်တော်တွင် ရှုံးနိမ့်
ဆင်းရဲနွမ်းပါးမှု လျှော့ချရေးရန်ပုံငွေမှ ရန်ကုန်တိုင်း ဒေသကြီးအတွင်းရှိ ဘုန်းတော်ကြီးသင် ပညာရေးကျောင်းများနှင့် ဆင်းရဲနွမ်းပါးသော မူလတန်းကျောင်းများမှ ကလေးသူငယ်များကို စဉ်ဆက်မပြတ် အာဟာရတိုက်ကျွေးပေးရန် ဗဟန်းမြို့နယ် မဲဆန္ဒနယ်အမှတ်(၂)မှ တိုင်းဒေသကြီး လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ် ဒေါက်တာညိုညို သင်းက ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော် အစည်းအဝေးတွင် တင်သွင်းခဲ့ရာ အဆို ရှုံးနိမ့်ခဲ့သည်။
''ကျွန်မတို့ရဲ့သားသမီး၊ ကျွန်မတို့ရဲ့တပည့်တွေကို တစ်နေ့ကို ထမင်းတစ်နပ်ပဲ ကျွေးနိုင်မယ်ဆိုရင် ဘယ်လိုခံစားရမလဲ။ ကျွန်မတို့ မနေ့တစ်နေ့ကပဲ ၂၀၁၃-၂၀၁၄ ဘဏ္ဍာနှစ်အတွက် ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး ဖြည့်စွက် ခွင့်ပြုငွေစာရင်းကို အတည်ပြုပေးခဲ့ပါတယ်။ အားလုံး အကြိတ်အနယ် ဆွေးနွေးခဲ့ကြတဲ့ အတိုင်းပဲ။ အရှေ့ပိုင်းခရိုင် တရားရုံးနဲ့ အနောက်ပိုင်းခရိုင် တရားရုံးတို့အတွက်ကို တစ်ရုံးကို သန်း ၅၀၀၀ အဲဒီမှာ ခွင့်ပြုထားပါတယ်။ အဲဒီလိုကာလမှာ ကျွန်မတို့ကလေးတွေအတွက်ကို တိုးတက် ဖွံ့ဖြိုးရေးကို လှည့်မကြည့်သင့်ဘူးလား။ ကျွန်မတို့ရဲ့ ကလေးတွေဟာ ဗလငါးတန် ဖွံ့ဖြိုးမှုမှာ အိမ်နီးချင်းတွေနဲ့ မယှဉ်နိုင်အောင် အဘက်ဘက်က အားနည်းနေတာကို တွေ့ရပါတယ်။ ဒီကလေးတွေရဲ့ လက်ထဲမှာ အနာဂတ် မြန်မာနိုင်ငံတော်ကို ထည့်ထားရကြောင်း၊ ထို့ကြောင့် အနာဂတ် မြန်မာနိုင်ငံတော်ရဲ့ အနာဂတ်ဟာ ရင်လေးစရာကောင်းပါတယ်''ဟု ဒေါက်တာညိုညိုသင်း က ထည့်သွင်း ပြောကြားသည်။
ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး လွှတ်တော်မြေနေရာကို ကားပါကင်လုပ်ရန်အတွက် ကုမ္ပဏီတစ်ခုကို ငှားရမ်းထားမှုမှ တစ်လ ငှားရမ်းခ ကျပ်သိန်း ၃၁၀ ရရှိခြင်းကြောင့် အဆိုပါငွေနှင့် ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး အတွင်းရှိ ဘုန်းကြီးကျောင်းများနှင့် ဆင်းရဲနွမ်းပါးသည့် ကျောင်းများမှ ကလေးများအား အနိမ့်ဆုံး နွားနို့တိုက်သည့် အစီအစဉ်များ ရှိသင့်ကြောင်း ဒေါက်တာညိုညိုသင်းက ဆိုသည်။
''ဘုန်းတော်ကြီးသင် ပညာရေးကျောင်း နှစ်ရာနီးပါးရှိပြီး ကျောင်သား/သူ ၅၀၀၀၀ ကျော်ရှိပါတယ်။ အခြေခံပညာ မူလတန်းများအနေဖြင့် ကျောင်းပေါင်း ၂၁၂၅ ကျောင်း နှင့် ကျောင်းသား ဦးရေ ၅၄၅၃၅၄ ဦး ရှိပါ တယ်။ ကျောင်းသားထဲမှ ၅၀၀၀၀၀ ခန့်ကို ပဲတစ်ရက်လျှင် နှစ်ရာနှုန်းဖြင့် ကျွေးမည်ဆိုပါက တစ်နေ့ကုန်ကျငွေ သိန်းတစ်ထောင်ခန့် ရှိပါတယ်။ စဉ်ဆက်မပျက် နေ့စဉ်တိုက်ကျွေးမည်ဆိုလျှင် တစ်နှစ်ကုန်ကျငွေ အကြမ်းအားဖြင့် ကျပ်သိန်းပေါင်းနှစ်သိန်းခန့် ကုန်ကျမည် ဖြစ်ပါတယ်။ ကျေးလက်ဒေသ ဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် ခွဲဝေချထားသည့် ကျပ်သန်း တစ်ထောင်မှ ခွဲဝေကျွေးနိုင်ဖို့ ဆိုတာအတော့်ကို စဉ်းစားရတဲ့ ကိစ္စဖြစ်ပါတယ်။ ထို့ကြောင့် ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးအတွင်းရှိ ဘုန်းတော်ကြီး သင်ပညာရေးကျောင်းများနဲ့ ဆင်းရဲသော မူလတန်းကျောင်းများမှ ကလေးများအား အဆက်မပြတ် အာဟာရတိုက်ကျွေးခြင်းအစီအစဉ်ကို ဆောင်ရွက်ပေးနိုင်ရန် မဖြစ်နိုင်သေးပါကြောင်း တင်ပြအပ်ပါတယ်'' ဟု ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး လူမှုရေးဝန်ကြီး ဒေါက်တာမြင့်သိန်းက ပြောကြားသည်။
ယင်းအဆိုကို မဲခွဲဆုံးဖြတ်ခဲ့ရာ ပြည်ထောင်စုကြံ့ခိုင်ရေးနှင့် ဖွံ့ဖြိုးရေးပါတီမှ လွှတ်တော် ကိုယ်စားလှယ်အများစု ကန့်ကွက်ခဲ့သဖြင့် လွှတ်တော်က အတည်မပြုဘဲ ရှုံးနိမ့်ခဲ့ရသည်။
(ဒဂုံမြို့သစ်အရှေ့ပိုင်းမြို့နယ်ရှိ ဘုန်းတော်ကြီး သင်ပညာရေးကျောင်းတစ်ခုတွင် ပညာသင်ကြားနေသော ကလေးငယ်များအားတွေ့ရစဉ်)
မကွေးတိုင်းဒေသကြီး၊ မြိုင်မြို့နယ် တောင်ဘို့ကျေးရွာတွင် ယမန်နေ့ 24.9.13 မနက် ၁၁ နာရီ ခွဲခန့်က ကျောင်းဝင်းထဲသို့ ရွာသားအချို့ ဒုတ် ဒါးလက်နက်များဖြင့် ဆရာတော် ဦးဝိစိတ္တ နှင့် အခန်းနေ သံဃာတို့အား ကြိမ်းမောင်းခြင်း ရိုက်နှက်ခြင်းများ ပြုလုပ်ခဲ့ကြသည် ဆရာတော် ဦးဝိစိတ္တ ရင်ဘတ်တွင် ပေါက်ပြဲဒဏ်ရာ၊ ဦးဇင်းနိုင်တိုး ရှေ့သွားနှစ်ချောင်းကျိုး နှင့် ကိုရင် ကြည်ဆွေ နားရွက် စုပ်ပြဲဒဏ်ရာ တို့ ရရှိသွားသဖြင့် ယခုအခါ မြိုင်မြို့နယ်ဆေးရုံ၌ ဆေးကုသခံနေရကြောင်း သိရသည်။
အဆိုပါ ဖြစ်စဉ်အား သက်ဆိုင်ရာ ရဲစခန်းများကို အကြောင်းကြားသဖြင့် လာရောက်ထိန်းသိမ်းပြီးဖြစ်သော်လည်း မည်သူလုပ်သည်ဟု မဖော်ထုတ်သေးဘဲ ဖော်ထုတ်မည့် အခြေအနေလဲ မရှိကြောင်း ကျောင်းထဲသို့ လက်နက်ကိုင်၍ ဝင်ရောက် လုပ်ကြံသူများမှာ လူအင်အား (၁၀)ယောက်ထက်မနည်းရှိပြီး ကျေးရွာအုပ်ချုပ်ရေးမှူးနှင့် ဆွေမျိုး နီးစပ်သူများဖြစ်သည့်ပြင် အုပ်ချုပ်ရေးမှူကိုယ်တိုင် အားပေးအားမြှောက် ပြုလုပ်ခဲ့သည်ဟု ကြားသိရသည်။
လွန်ခဲ့ပြီးသော နှစ်နှစ်ခန့်က ကျောင်းထိုင်ဆရာတော်ဘုရားကြီး ဘဒ္ဒန္တဇ၀န ပျံလွန်တော်မူပြီးချိန်မှစ၍ ကျေးရွာ အုပ်ချုပ်ရေးမှူးနှင့် အပေါင်းပါများက ၄င်းတို့နှင့် ဆွေမျိုးတော်စပ်သည့် သံဃာတစ်ပါးအား ၄င်းကျောင်းတိုက်တွင် ကျောင်းထိုင်ဆရာတော်အဖြစ် အတင်းအဓမ္မတင်မြှောက်ရန် ကြိုးစားခဲ့သော်လည်း မအောင်မြင်သဖြင့် ရွာဦးကျောင်းရှိ ထိုရွာဇာတိဖွား သံဃာတော်များ အပ်နှင်းထားသဖြင့် စောင့်ရှောက်နေထိုင် သီတင်းသုံးလျှက်ရှိသော သံဃာတော်သုံးပါးအား အငြိုးအတေးထားကာ ကြံစည်တိုက်ခိုက်ခဲ့ကြခြင်းဖြစ်သည်။
ယခုအခင်းဖြစ်ရပ်တွင် ဒုတ် ဒါး လက်နက်ကိုင်ဆောင်၍ ကျောင်းထဲတွင် ဆဲဆိုကြိမ်းမောင်းခြင်း သံဃာတော်များအား ရိုက်နှက် သတ်ဖြတ်ရန် ကျိုးစားခြင်းပြုသူ ၁၀ ဦးထက်မနည်း ရှိခဲ့သော်လည်း ဖမ်းဆီးအရေးယူမှု တစ်စုံတစ်ရာ မရှိသေးကြောင်း ၄င်းရွာသား တစ်ဦးထံမှ သိရှိရပါသည်။
မြန်မာပြည်နှင့် ဦးနှောက်လှည့်စီးခြင်း (Brain Circu...
Stars and Models Agency နှင့်ခင်လပြည့် ဇော်တို့ ...
တရုတ်ပြည် လွတ်လပ်ကုန်သွယ်ဇုန်တွင် Facebook/Twitter...
ဆေးရုံတွင် စစ်ဆေးပြီးနောက် နှစ်တန်းကျောင်းသူ တစ်ဦး...
ကျောက်ဖြူ မဒေးကျွန်း ဆန္ဒပြ ခေါင်းဆောင်များကို စီရင...
အသင့်ဖျော် ကော်ဖီနှင့် လက်ဖက်ရည်မှ အာဟာရဓာတ် မရနို...
ရခိုင်ပြည်နယ်အတွင်း ပုဒ်မ(၁၈)ဖြင့် ထောင်ချခံရမှု မျ...
High Blood Pressure Aftermath သွေးတိုးကျဆေး သတိပေး...
ချမ်းသာသည်ကို ကြွားလုံးထုတ်ပြီး လူအများကို “လယ်သမာ...
ဘောလုံးအဖွဲ့ချုပ်နှင့် တိုယိုတာကားကုမ္ပဏီတို့ စပွန်...
အဝေးသင် တက္ကသိုလ် စာမေးပွဲအောင်မှတ်များ ထပ်မံတင်းကျ...
MRTV-4 နဲ့ ဘယ်တော့မှ ဇာတ်ကားမရိုက်တော့ဘူးဆိုတဲ့ စိ...
ညီမစိတ်ကောက်တိုင်း သူက ချော့တယ်ဆိုတာ မရှိခဲ့ဘူးဆို...
သမ္မတဦးသိန်းစိန်က ထာဝရ ငြိမ်းချမ်းရေး ရရှိရေးအတွက် ...
တပ်မတော်အရာရှိတစ်ဦး အသတ်ခံရမှု စုံစမ်းပြီး အကြောင်း...
ကမ္ဘာ့ခေါင်းဆောင်ဟောင်းများအဖွဲ့ ကိုမင်းကိုနိုင်နဲ ...
မိုးသည်းထန်စွာ ရွာသွန်းမှုနှင့်အတူ နေပြည်တော် နယ်ြေ...
ဆင်းရဲနွမ်းပါး မူလတန်းကျောင်းများမှ ကလေးများကို စဥ...